အခွံနွှာပြီးသား အုန်းသီးလုံး အရွယ်အစားရှိတဲ့ အမွှေးထူထူ အနက်ရောင် မြို့ကြွက်တွေကို လူတယောက် ဝင်ရုံသာဆံ့တဲ့ တန်းလျား ရေချိုးခန်းမှာ သိုင်းကွက်နင်းသလို ရှောင်နေရ တာက အသက် ၆၀ အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူ့အတွက် မထူးဆန်းတော့။
အပြင်ပန်း ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရှေးခေတ် တိုက်အိုကြီး တလုံးဆိုပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ အရည်အသွေး မကောင်းတဲ့ အထပ်မြင့် တိုက်တွေလောက်ကိုတော့ ဒီတိုက် အိုကြီးကမမှုလောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် တိုက်အိုကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ လှေကား အတက်အဆင်း မျက်နှာကျက်တွေဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တွေမှာ အုတ်သားတွေ ကွာကွာ ကျလာ တာကို ရှောင်ရှား ရတာကတော့ သူ့အတွက် အလေ့အကျင့် တခုဖြစ်လို့နေပါပြီ။
ဒါကတော့ ရန်ကုန်မြို့လယ်က ရဲတပ်ကြပ်တဦးရဲ့ ဇနီးတယောက် မိသားစုနဲ့အတူ ရဲဝန်ထမ်း တိုက်မှာနေ နေရတဲ့ ပြဿနာ တွေ အများကြီးထဲကမှ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဖြစ်စဉ် အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
ဒီရဲစခန်းကြီးဟာ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးသစ်တွေ အကြားမှာ မခန့်သလို ဖြစ်နေရတဲ့ ကျောက်တံတား ရဲစခန်းတည်ရှိရာ အဆောက်အဦး အိုကြီးပဲဖြစ် ပါတယ်။
ဧရာမ ကြွက်ကြီးတွေနဲ့ မိတ်ဆွေသဖွယ် အတူယှဉ်တွဲပြီး ဆယ်ပေပတ်လည် အခန်းကျဉ်းအတွင်း မိသားစုလေးငါးခြောက် ယောက် နေထိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့ အနေအထိုင် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ တွေအပြင် အထက်အရာရှိကို မလွန်ဆဲရဲတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ တခြား ပြဿနာပေါင်းများစွာတွေကိုလည်း နေ့စဉ်ဆိုသလို ရဲဝန်ထမ်းတွေ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ သာမန် ရဲဝန်ထမ်းတွေဟာ မြို့နယ်မှူးအဆင့်နဲ့ ခရိုင်မှူးအဆင့်ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ အထက်လူကြီးတွေက အာဏာနဲ့ခိုင်းစေတဲ့ တာဝန်မဟုတ်သော အလုပ်များကို တာဝန် ချိန်များမှာလည်း လုပ်ပေးနေရတယ်လို့ ကျောက်တံတား မြို့နယ်မှာ တာဝန်ကျတဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုပါတယ်။
“ကျမတို့နေရတော့ တော်တော် စုတ်စုတ်နေရာမှာ။ ကတော်တွေ ဒီကိုလာမယ်ဆို ဘုရားပန်းလဲထားရ၊ အိမ်က ကလေးတွေကို အဝတ်သန့်သန့် ဝတ်ပေးရနဲ့ မလိုတာတွေ တကယ် လုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စခန်းမှူးကတော်တွေက ခဏခဏ ဟိုကြေး၊ ဒီကြေးနဲ့ ပေးရတာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ကျမတို့ရဲမိန်းမတွေက ယောင်္ကျား လုပ်စာ မလောက်မငှလို့ အပြင်ထွက် ဈေးရောင်းရပါတယ်ဆိုမှပဲ ရဲစခန်းထဲ အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်ပေးရတာ ရှိသေးတယ်” လို့ ရန်ကုန်မြို့လယ် ရဲစခန်းတခုက ရဲဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ် ဇနီးသည်တဦးက ပြောပါတယ်။
ကျပ် ၄ သောင်းကနေ ၇ သောင်းအထိသာ အမြင့်ဆုံးရရှိတဲ့ သာမန်တပ်ကြပ်အဆင့် ရဲဝန်ထမ်းတွေဟာ အများပြည်သူဆီက အဂတိလိုက်စားဖို့ အခွင့်အလမ်းတောင် မရှိသလောက် ဘဲလို့ ပုစွန်တောင်မြို့နယ် ရဲစခန်းက ရဲတပ်ကြပ် တဦးက ပြောပါတယ်။
“နယ်ထိန်း ဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ်ရတဲ့ နယ်မြေမှာ ရပိုင်ခွင့်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ ရာနှုန်းပြည့် ရိုးရိုး သားသား လုပ်ပါတယ် ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ တချို့ ရဲဝန်ထမ်းတွေ ကျတော့ လည်း နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ ယူကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမှမယူရင် ကျနော်တို့တွေမှာ ရတဲ့လစာနဲ့က မလောက်ဘူး။ လစာတွေသာ ကောင်းနေရင် ဒီလိုအဖြစ်တွေလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ပါ ဘူးဗျာ” လို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုပါတယ်။
ရဲယူနီဖောင်းတွေကိုလည်း သူတုိ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ ချုပ်လုပ်ဝတ်ဆင်ရပြီး ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ကတော့ စုတ်ချာလွန်းတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်တရံကိုပဲ အမြဲအသုံးပြု နေရပါတယ်လို့ အထက်ပါ အမျိုးသမီးက ဆိုပါတယ်။
“လူကြီးလမ်းကြောင်းတွေရှိရင် ဝတ်ရတဲ့ ခါးရှည် ယူနီဖောင်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ဝယ်ဝတ်ရတာ။ ဖိနပ်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပဲ။ ရဲ ခါးပတ်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ။ အများစု ကတော့ မတတ်နိုင်ကြလို့ ကျနော်တို့ အောက်ခြေ ရဲတွေရဲ့ အသွင်အပြင်က အမြဲတမ်း မသားမနား ဖြစ်နေရတယ်” လို့ လှိုင်မြို့နယ် ရဲစခန်းက ရဲတပ်ကြပ် တဦးက ပြောပါတယ်။
ယနေ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေအရ လုံခြုံရေးယူထားသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်နှင့် ဒေသခံများ ၂ ဖက်စလုံး တင်းမာမှုများ လျော့ကျသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ တဖက်နှင့်တဖက် လက်နက်ကိုင် ဆောင်ကာ အသင့် အနေအထားမျိုး မပြင်ဆင်ထားတော့ကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
ဒေသခံများက ကျည်ဆံ ထိမှန်သူ ၄ ဦးရှိသည်ဟု ပြောဆိုကြသော်လည်း ကျည်ဆံထိမှန်သော ဒဏ်ရာဖြင့် အရပ်သား လူနာများ ရှိမရှိကို မအူပင် ဆေးရုံက အတည်ပြုချက် မပေးပေ။ အသားကို ဖောက်ထွင်းသွားသည့် ဒဏ်ရာများ တွေ့ရှိရသော်လည်း ဒဏ်ရာထဲတွင် ကျည်ဆံ မတွေ့ရှိရကြောင်းနှင့် ဒေသခံလူနာများကို ရာဇဝတ်မှု လူနာ (PC) အဖြစ် ဆေးကုသပေး ခြင်းမျိုး မရှိကြောင်းလည်း ဒေါက်တာ မြင့်စိုးက ပြောသည်။
ထို့အတူ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသော ပုသိမ်ခရိုင်၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခရေကုန်းရဲစခန်းမှ ရဲတပ်သား ကိုဇော်မင်းထွန်း ကလည်း မိမိတို့က အေးအေးချမ်းချမ်းပင် ဖြစ်စေချင်သည့် အတွက် လူကြီးများကိုယ်တိုင်း ညှိနှိုင်းခဲ့သော်လည်း ဒေသခံများဘက်မှ လက်မခံခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အတွက် တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင်ရှိသည့် အခြေအနေထက် ကျော်လွန်ပြီး ဒေသခံများအပေါ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမျိုး မရှိကြောင်း၊ ပြည်သူများဘက်မှလည်း ဥပဒေနှင့် တာဝန်များကို လိုက်နာ ရန် လိုအပ်ပြီး မလိုက်နာသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ မဖြစ်သင့်သည်များ ဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မအူပင်မြို့နယ် ရဲမှူး တင့်ဆွေက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် နေ့ညတွင် ရွှေည၀ါဆရာတော် အပါအ၀င် ဆရာတော်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်က လျှောက်ထားခဲ့သည်။
ဆရာတော် အရှင် ဝီရသူက “ဒီပဋိပက္ခတွေ ဖော်ဖို့က မျှတဖို့လိုတယ်။ ဖြေရှင်းပုံ ဖြေရှင်းနည်းက နည်းလမ်းကျပေမယ့် ရွာသားတွေက အာဏာပိုင်တွေဘက်ကို ယုံကြည်မှု မရှိကြ သေးဘူး။ အဲဒါကို ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ လိုတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ကလည်း ထင်သာမြင်သာ ရှိဖို့လိုတယ်” ဟု ပြန်လည်မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် အဓိကရုဏ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မလက်တို ကျေးရွာအနီး အော့ချက်ဒ် ကုမ္ပဏီပိုင် ဧက ၅၅၀ ရှိ ငါးမွေးကန်၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဗေဒါစာသင်ကျောင်းမှ လင်းပိုင်စိုး၏ လှုံဆော်မှုဖြင့် လူအင်အား ၁၀၀ ခန့်က စပါးစိုက်ပျိုးရန် အကြောင်းပြ၍ ဥပဒေမဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ မန်နေး ဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ မြင့်စိန်က အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် မြို့နယ်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများက လာရောက်ဖျောင်းဖျခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် လူအုပ်စုမှာ ၂၀၀ ဦးအထိ ရှိလာပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
မအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုကျေးရွာမှာ လယ်သမားတွေနဲ့ ရဲလုံခြုံရေးတွေ အကြား ပဋိပက္ခအတွင်း အာဏာပိုင်တွေဖက်က ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တာဝန်ယူဖြေရှင်းဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ် အိုဟေး ကင်တာနားက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာ မှာ ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်တွေဖက်က အမျိုးသမီးတွေကို အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို မြင်ရတော့ သူ့အနေနဲ့ အလွန်ပဲ ထိတ်လန့်တုန့်လှုပ်ရတယ်လို့ မစ္စတာကင်တာနားက ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မစ္စတာကင်တာနားနဲ့ ဗွီအိုအေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကို ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ဆက်ပေးမှာပါ။
“တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာအချက်ကတော့ ဒီဗွီဒီယိုမှာ ကျနော်မြင်တွေ့ရတာက - ဘေးမှာရပ်ကြည့်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် လုံခြုံရေးရဲတွေရဲ့ တုံ့ပြန်ပြုမူပုံပါပဲ။ ရုတ်တရက် ဒီအမျိုး သမီးတွေကို ရဲဝန်ထမ်းတွေက အကြမ်းဖက်တာ တိုက်ခိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော် ထပ်ပြီး ပြောပါရစေ။ ဒါဟာ တကယ်ကို့ တုန်လှုပ်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့်၊ ရဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပြုမူပုံတွေဟာ အရင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အတိုင်း မပြောင်းသေးဘူးဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်အတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုပါ။ ဒါကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ ကျနော်နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံစဉ်ကလည်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေရဲ့ အပြုအမူတွေကို လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းပေးပြီး ပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီချိုးဖောက်မှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှာ ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။”
ပဋိပက္ခကြောင့် ရဲတဦး ဆေးရုံမှာ သေဆုံးပြီး၊ ရဲရော အရပ်သားအတော်များများပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ လယ်သမားတွေဖက်ကတော့ ရဲလုံခြုံရေးဖက်က စတင်ရိုက်နှက်လို့ သူတို့ ပြန်ပြီး ခုခံတာပါလို့ ပြောပါတယ်။ ရဲဖက်ကတော့ သူတို့ဟာ ဥပဒေအတိုင်း ကိုင်တွယ်တာပါ လို့ ချေပပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိ မလက်တိုကျေးရွာဖက်မှာ အခြေအနေ တွေက တင်းမာနေတုန်းပါ။ မစ္စတာကင်တာနားကတော့ အခု အဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလုပ်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကို တင်ပြသွားမယ် လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်အနေနဲ့ သေချာပေါက်ပါပဲ ဂျနီဗာမှာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း ဒီအကြောင်း ကျနော် အသိပေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုနေအခါမှာ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းပြန့်နှံနေတဲ့ ဒီတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ဗွီဒီယိုရုပ်ပုံတွေကို အရေး ယူဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရဲတွေရဲ့ အလေ့အကျင့်တွေပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာ သက်သေပြရာ ရောက်ပါတယ်။”
“လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့၊ တချို့နေရာတွေ မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချခဲ့တာတွေ တွေ့ရတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အလေ့ အကျင့်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်တာမျိုး ကျနော် မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီကိစ္စသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြေးနီစီမံကိန်း ပဋိပက္ခ ဖြိုခွင်းတုန်းကလည်း ရဲက မီးလောင်ဗုံးသုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။”
မအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု ပလောင်းကျေးရွာအပိုင် ကွင်းအမှတ် ၉၆၉ အတွင်းက လယ်မြေဧက ၅၀၀ ကျော်ကို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတခုက ၁၉၉၆ ခုနှစ်တုန်းက သိမ်း ယူခဲ့တဲ့နောက်၊ အခု အသုံးမပြုဘဲ ထားတယ်ဆိုပြီး လယ်သမားတွေဖက်က သူတို့ မူလ လယ်မြေကို ပြန်ယူဖို့ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရာကနေ ပြဿနာတွေ စခဲ့တာပါ။ အင်္ဂါနေ့မှာ အာဏာပိုင်တွေက အဲဒီနေရာမှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်၊ အဲဒီလယ်မြေတွေမှာ နေရာယူထားတဲ့ လယ်သမားတွေကို အကြမ်းဖက် ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ်ဖြစ်ချိန်မှာ လယ်သမားတွေဖက် ကလည်း ပြန်လည် တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီး၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖက်က သေနက်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲတာတွေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
မလေးရှားအခြေစိုက် NRF အဖွဲ့ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း မူဆလင် အများစု နေထိုင်ရာဒေသကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးဖို့ တော်လှန်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲက တဖွဲ့ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်း တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက သဘောတူညီမှု ရှိမရှိတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘန်နဒစ်ဟာ ကြာသာပတေးနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၈ နာရီကစပြီး ရာထူးကနေ တရားဝင်နှုတ်ထွက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး အဖြစ်ကနေ တရားဝင်နှုတ်ထွက်တဲ့အနေနဲ့ ရောမမြို့အပြင်ဘက်က Gandolfo ရဲတိုက်ကို ကြာသာပတေးနေ့ အစောပိုင်းက ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ ၈ နာရီမှာတော့ ဗာတီကန်က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး နေထိုင်တဲ့နေရာက ဂိတ်ပေါက်က ဆွစ်နိုင်ငံသားအစောင့် ၂ ယောက်ဟာ တံခါးကို ပိတ်ပြီး အဲဒီနေရာကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရ အသုံးစရိတ်ဖြတ်တောက်မှု သောကြာနေ့ စတင်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဒီကနေ့ သောကြာနေ့ကစလို့ အစိုးရ အသုံးစရိတ် ၈၅ဘီလျံ ဒေါ်လာ လျှော့ချ ဖြတ်တောက်ရမဲ့ အခြေအနေကို ရှောင်ရှားနိုင်ရေး အဆိုပြုကြတဲ့
ဥပဒေ ကြမ်းတွေကို ဆီးနိတ်လွှတ်တော်မှာ ပယ်ချလိုက်ကြတဲ့အတွက် အသုံးစရိတ် ဖြတ်တောက်မှုတွေကို ရှောင်ရှားလို့ မရတော့တဲ့ အနေအထားမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးစရိတ်တွေ ဖြတ်တောက်မလဲဆိုတာကို သမ္မတအနေနဲ့ ပိုပြီး ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ Republican တို့ရဲ့ အဆိုပြုချက်ကို ကြာသပတေးနေ့ က Democratic တွေ က ပယ်ချခဲ့ပါတယ်၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ အမေရိကန်တွေကို အခွန်တိုးကောက်ရေးနဲ့ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး အသုံးစရိတ်ထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်တွေကို ရပ်ဆိုင်းရေး၊ Democrat တွေရဲ့ အဆိုပြုချက်ကိုလဲ Republican တွေဖက်က ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ သောကြာနေ့ကစလို့ မဖြစ်မနေ အလိုအလျောက် အသုံးစရိတ် ဖြတ်တောက်ရတော့မယ် ဆိုရင် အစိုးရဌာနတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေ
ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပတ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လျှော့ချရမှာဖြစ်ပြီး အစိုးရဝန်ထမ်း အများအပြားဟာလည်း လစာမဲ့ခွင့်တွေကို ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေကို ရှောင်ရှား နိုင်ရေးအတွက် သမ္မတအိမ်ဖြူတော်နဲ့ Congress လွှတ်တော်တို့က ပြေလည်အောင် အပေး အယူ မလုပ်နိုင်ကြတဲ့အပေါ်မှာလဲ တော်တော်များများက အားမလို အားမရဖြစ်နေကြ ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက မဲခေါင်မြစ်အတွင်း တရုတ်ကုန်တင်သဘောင်္ နှစ်စင်းကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက်ကို သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ကူမင် တရားရုံးမှာ နော်ခမ်းနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နော်ခမ်းနဲ့ အပေါင်းပါ သုံးယောက်ကို သေဒဏ်အပြစ်ပေးတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အပြင် ကူမင်မြို့ မှာရှိတဲ့ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ကောင်စစ်ဝန်ရုံး တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ လာရောက်ကြည့်ရှု တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက် တရားရုံးက စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ သေဒဏ်စီရင်ပြီးတဲ့အခါ အပြစ်ပေးခံရ သူတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ သေတမ်းစာနဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေကို လွှဲပြောင်း ပေး အပ်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“သူတို့လေးယောက်ကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် သူတို့တွေ အတော်ကြီး တုန်လှုပ်ချောက်ခြားသွားကြတယ်။ သူတို့ဆက်ပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်လိုတဲ့အကြောင်း အကြီး အကျယ် ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ ခုချိန်မှာ သူတို့လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့ သီးသန့်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ သူတို့ကို ကျနော်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသလို ဥပဒေနဲ့အညီ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ပေးထားပါတယ်။” - လို့ ယူနန်ပြည်နယ် အကျဉ်းထောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြောသွားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုး လုပ်မှာ မဟုတ် ဘူးလို့ အမေရိကန် အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့အတွက် နိုင်ငံရေး နဲ့ စီးပွားရေးအပြင်၊ လူ့အခွင့်အရေး အခြေခိုင်ဖို့ အမေရိကန်က လိုလားတဲ့အကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။ မနေ့က အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်မှာ ကြာသပတေးနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ကြားနာစစ်ဆေးပွဲမှာ အမေရိကန် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေက အခုလို ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် သတင်းယူခဲ့တဲ့ ကိုကျော်သိင်္ခက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ အမေရိကန် စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ အလုပ်သမားရေး ရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael Posner နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် မူဝါဒရေးရာ အထူးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူး Patrick Murphy တို့ဟာ မနေ့က ပြု လုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကြားနာပွဲ မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေအပြင်၊ အနာဂတ်မှာ အမေရိကန် နဲ့ မြန်မာ စစ်ရေးအရ ဆက်ဆံရေး နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခန်းဏ္ဍ နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
"မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ လိုလားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့က နိုင်ငံရေး နဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဈေးကွက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လိုသလို နိုင်ငံရေးစနစ်မှာလည်း လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ရပ်က အတူတကွ ဒွန်တွဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘဲ ဒီမိုကရေစီကို သံဓိဌာန်ခိုင်မာစွာ မဖော်ဆောင်တဲ့ နိုင်ငံမှာဆိုရင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက မလွယ်ပါဘူး။ ကျနော် မြင်ရသ လောက်က တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကတော့ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ မူဝါဒဖြစ်ရမှာပါ။”
“ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ စစ်တပ်ပါဝင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မလုပ်ဖို့ ပြောနေသလို၊ တခြား အကန့်အသတ်တွေ လည်း ကျနော်တို့ ချထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြန်ပြီးတော့ အစီရင်ခံဖို့ လိုအပ်ချက်တွေလည်း ကျနော်တို့ ချမှတ်ထားပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ လေးစားလိုက်နာဖို့ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ အလုပ်သမားရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီတွေက လေ့လာဖို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ အလေးထားပါတယ်။ ခရိုနီတွေအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်း ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ လျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စတွေဟာ ကျနော်တို့ အလေးထားတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်”
မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ(၁၀၅) တစ်ခုမကရှိနေသည့် နောင်ချိုဒေသခံများ
ကျောက်မဲခရိုင် နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်း၌ ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ဖြတ်ကာ နောင်ချို-တောင်းခမ်း-တောင်ကြီးကား လမ်း ဖောက်လုပ်နေ မှုကြောင့်အိမ်ခြံမြေဈေးများ မြင့်တက်လာသည်နှင့် အမျှမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားဖွယ် ကိစ္စများမှာ တရားရင်ဆိုင်ရသည် အထိဖြစ်ပွားမှုများလာကြောင်း နောင်ချိုဒေသခံတို့က ဆိုသည်။
နောင်ချို၊ တောင်းခမ်း၊ အင်တော၊ ကျောက်ဂူ၊ ရပ်စောက်၊ တောင်ကြီးမော်တော်ကားလမ်းစီမံကိန်း ပြီးစီးပါက ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ကို ဖြတ်၍ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းဆက်သွယ် နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက်နောင်ချိုမြို့ နယ်အတွင်း၌ ပြီးခဲ့သည့် ၂နှစ်တာကာလအတွင်းကထက်အိမ်ခြံမြေဈေးမှာ ထက်ဝက်ကျော် မြင့်တက်လာ ချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့မြေနေရာပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံ(၁၀၅) ထပ်နေသည့် အမှုများပြားလာခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပုံစံ(၁၀၅)နှစ်ခု သုံးခု လေးခုအထိ ပိုင်ဆိုင်သူများနေသည့်ပြဿနာအတွက် တာဝန်ခံမြေရှင်း ပေးမည့်သူမှာ မြို့နယ်အတွင်း၌လက်ရှိအချိန်အထိ မရှိဖြစ်နေကြောင်း ဒေသခံတို့က ဆိုသည်။
နောင်ချိုမြို့အတွင်း၌ ပုံစံ(၁၀၅) ထပ်၍ ပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးထက်မကရှိနေသည့် ရပ်ကွက်များမှာ တောင်ရပ်ကွက်၊ ဈေးရပ်ကွက် ဘူတာရပ်ကွက်နှင့်နမ့်ဆောင် ဟူးကျေးရွာများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်မတို့ကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးတယ်ဆိုပြီး မတရားလုပ်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။”ဟုတောင်ရပ်ကွက်မှ ပုံစံ(၁၀၅) ကိစ္စ အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ ဒေါ်အမာရီက ပြောသည်။
ဒေါ်အမာရီပိုင်ဆိုင်သည့် မြေကွက်မှာယခင်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအတွက်ဟုဆိုကာ မြေယာ ချထား ပေးသည့်
မြေကွက်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတို့စတင်နေထိုင်စဉ်က တောအနေအထားသာရှိသေးကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
၄င်းနှင့် မြေယာအမှုအခင်းဖြစ်ပွားနေသူမှာ ပြင်ဦးလွင်မြို့နေဒေါ်ရိုစီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၄င်းထံတွင် ပုံစံ ၁၀၅ မရှိပဲ
မြေပေးမိန့်သာရှိကြောင်း၊ သူမ၏ ပုံစံ၁၀၅ အား ခေတ္တငှားရမ်းကာ မိတ္တူကူး၍၃ လအကြာမှ မြေစာရင်း၌ ပုံစံ(၁၀၅) ပြုလုပ်၍ ပုဒ်မ ၁၆၄ မြေပေးမိန့်နှင့်၎င်းအား တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်အမာရီ က ဆိုသည်။
မြို့နယ်အတွင်း၌ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပုံစံ(၁၀၅) ပိုင်ရှင် နှစ်ဦး၊သုံးဦးအထိ ရှိနေကြောင်းကိုလည်း မြိုနယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
“မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု အားနည်းချက်တွေကြောင့် ပြသာနာတွေအဖြစ်များရတာပါ၊ ပုံစံ(၁၀၅) နှစ်ခု ထပ်နေတဲ့ အမှုတွေ ရှင်းနေရတာလည်းရှိပါတယ် ”ဟု နောင်ချိုမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြိုနယ်ထွေ/အုပ်ရုံးမှ ယခင်တာဝန်းရှိသူများကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုအားနည်းချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိစ္စရပ်များအားစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ပုံစံ(၁၀၅) အမည် ပေါက်မပေါက်၊ မြေစာရင်း၌မြေလွတ်/မြေရိုင်းစာရင်း သက်ရောက်ခြင်း ရှိ/မရှိကိုလည်း စစ်ဆေးနေကြောင်း၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ယခင် န၀တ အစိုးရလက်ထက်က ထုတ်ထားပေးသည့် ပုံစံများရှိနေခြင်း၊ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသိများမှ သတင်းအမှောင်ချထားခြင်းများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု တောင်သူအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမြင့်ထံမှသိရသည်။
နောင်ချိုမြို့၌ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်က အနည်းဆုံးကျပ်သောင်းဂဏန်းဝန်းကျင်မှ အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင် သာဈေးရှိခဲ့သည့် တောင်ရပ်ကွက်မှ ပေ(၈၀×၆၀) မြေကွက်များမှာ လက်ရှိတွင်ကျပ်သိန်းတစ်ရာဝန်းကျင်မှ သိန်းတစ်ရာကျော်အထိ ဈေးပေါက်နေသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှု အရှုပ်အထွေးဖြစ်လာရ သည်ဟု ပုံစံ(၁၀၅)ထပ်၍အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ များထံက သိရသည်။
“ပထမဆုံး ပုံစံ၁၀၅ ထုတ်ပေးထားတာကို၊ နောက်ထပ် ၁၀၅ ကဘယ်လိုပေါ်လာလဲမသိဘူး။သတင်းစာ ထဲမှာလည်း အဲဒါတွေကို ပြန်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြီးသား။ နဂိုက ချုံပုတ်တွေ ပဲရှိတဲ့နေရာကို ရှင်းလင်း ပြီး အိမ်ဆောက်ပြီးမှ အခုမြေဈေးတွေ ကောင်းလာမှ ဒါတွေပေါ်လာတာ။ မတရားသဖြင့် အာဏာနဲ့ လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့က ပြောရတာပါ”ဟု အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ မမြင့်မြင့်သန်း၏ဦးလေးဦးတင်ဦးက ပြောသည်။
နဂိုလူမှ ခြံဝန်းမခတ်၍ ပစ်ထားသည့်မြေအား အေးချမ်းဖြိုးမှပြန်လည်သိမ်းယူပြီးနောက် မြေနေရာပြန်ချထား ပေးရာ၌ ယခုကဲ့သို့ပုံစံထပ်သည့် အမှုဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့် တရားလို မမြင့်မြင့်သန်းမှာမြိုနယ်အဆင့်တွင်ရုံး၍ ခရိုင်အဆင့်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်အထိတက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက မြေယာများ၌ဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခြင်းမရှိသည့်မြေနှင့် ၀န်းခြံမခတ်ထားသည့် မြေများအားပြန်သိမ်းမည်ဟု ပုံစံ(၁၀၅)နှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်အားနိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများမှတဆင့်ကြေညာခဲ့ကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
၄င်းတို့နည်းတူ ပုဒ်မ(၄၇၇)ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနှင့်အမှု့ရင်ဆိုင်နေရသူတောင်ရပ်ကွက် ကွင်းအမှတ် (၂၃)ဦးပိုင် (၁၆၂)ပိုင် ဦးအောင်မြင့်ဦးမှလည်း၎င်းကြုံတွေ့နေရသည့် အခက် အခဲအား ယခုကဲ့သို့ဆိုသည်။
“ကျွန်တော့်မှာ မြေပေးမိန့်အပါအ၀င်ထောက်အထားတွေခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါရက်နဲ့ ပုံစံအသစ် ထုတ်ပေးတာ၊ တရားရုံးမှာ လွဲမှားစွာ ဆုံးဖြတ်တာနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ခံနေရတယ်၊ ကျွန်တော် မိန်းမလည်းဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပဲ လေဖြတ် သွားတယ်၊ ဒီလို မြေစာရင်းနဲ့ တရားရုံးကမမှန်မကန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဒုက္ခရောက်နေရ တယ်”ဟုဦး အောင် မြင့်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းအနေဖြင့် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစတင်ကာ လက်ရှိအချိန်အထိဦးမောင်မြင့်နှင့် တရားရင်ဆိုင်နေ ရဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပုံစံ(၁၀၅)ထပ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍နောင်ချိုမြို့နယ်မြေစာရင်းရုံးသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာယခင်လူများပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကိစ္စများဖြစ်သည့်အတွက်ဖြေ ကြား နိုင်ခြင်းမရှိဟုသာ ဖြေကြားခဲ့သည်။
နောင်ချိုမြို့နယ် တရားရုံး၌ တန်ဖိုးကျပ်သိန်း(၁၀၀)အောက်ရှိမြေယာအမှုများကိုသာ ကိုင်တွယ်ဆုံးဖြတ်လျှက် ရှိပြီး ကျပ်သိန်း(၁၀၀)အထက်မြေယာတန်းကြေးရှိ အမှုများကိုမူ ခရိုင်ရုံှး၌တရားစွဲဆိုနိုင်ကြောင်းအမှုရင်ဆိုင် နေရ သူများထံက သိရသည်။
“မြို့နယ်ရုံးက ဆုံးဖြတ်တာမှန်သမျှကို ခရိုင်ရုံးက ဒီအတိုင်းပဲပြန်ချနေတော့ ကိစ္စကို လွတ်တော်က ကိုင်တွယ် မှပဲ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ကအဆင်ပြေမှာပါ”ဟု တောင်သူအကျိုးဆောင် အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမြင့် မြို့နယ်၏တရားစီ ရင်ရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြို့နယ်အဆင့် တရားရုံးများမှ တရားစီရင်ချက်ချရာ၌ ယခင်စနစ်ဆိုးဖြစ်သည့် ငွေများတရားနိုင်သည့်စနစ်မှ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးကြောင်းကိုလည်း ကျောက်မဲမြို့ခံ ဥပဒေ ပညာရှင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
"အောက်ခြေအဆင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာတော့ အရင်ကအတိုင်းပဲ မပြောင်းလဲသေးဘူး၊ မြို့လေးတွေဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ "ဟု ဥပဒေပညာရှင်ဦးဝင်းအောင်က ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
နမ်ဆောင်ဟူးကျေးရွာနေ ဒေါ်မိုးယဉ်မှာလည်း ၄င်းပိုင်ဆိုင်သည့်ကံကြီးလမ်းဘေးမှ ပေ(၈၀×၆၀)အကွက် အတွက် ပုံစံ(၁၀၅)နှင့်မြေပေးမိန်၎င်း၌ရှိသော်လည်း (၆)လနှင့် အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုသဖြင့်အေးချမ်းဖြိုးဥက္ကဋ္ဌမှ သိမ်းယူလိုက်သည့်အပေါ်တွင်ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
အလားတူ နမ့်ဆောင်ဟူးကျေးရွာမှ မခိုင်ခိုင်လွင်ကလည်း ၄င်းပိုင်ဆိုင်သည့်ကွင်းအမှန်(၈၉)မှ (၁.၃)ဧက အကျယ်အ၀န်း ရှိမြေအား ၆၀၆ တပ်ရင်းမှူးမှ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့် မြေကွက် ပုံစံ(၁၀၅)အား အတုဟုဆိုကာ (၃)လအတွင်း ဖယ်ခိုင်းသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နောင်ချိုမြိုနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် လွှတ်တော်သို့စာတင် ထားကြောင်းကို လည်း သိရသည်။
“အရင်က နယ်မြေအေးချမ်းမှုမရှိလို့ မြေအသိမ်းခံခဲ့ရတယ်၊ အခုနယ်မြေလည်းအေးချမ်းပြီ၊ ပွင့်လင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ မြေကိုဖယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မဖယ်ပေးနိုင်ဘူး၊ ပြန်ရချင်တယ်”ဟု မခိုင်ခိုင်လွင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ မြေယာအမှုအခင်းများအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ မြေစာရင်းဋ္ဌာနနှင့်ခရိုင်နှင့်မြို့နယ် တရားရုံးများ၌ တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ၄င်းတို့အနေဖြင့် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမည့် ကိစ္စများဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သီပေါမှ ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲထွန်းက ဆိုသည်။
“မြေယာအမှုအခင်းတွေအတွက် ပြည်သူတွေအပေါ် ဒီလိုမတော်မတရားမလုပ်ပါနဲ့လို့သက်ဆိုင်ရာဋ္ဌာနတွေကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့လို့ အပ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် သူ့ဝန်ကြီးဋ္ဌာနတွေကို ရှင်းပြ၊ ၀န်ကြီးဋ္ဌာနတွေကလည်း အကျိုးစီးပွားရှိကြတော့ဆက်စပ်နားလည်အောင် သေချာ ရှင်းပြ ဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှဖြစ် နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေကို အပြောင်း အလဲလုပ်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်”ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 5:17 PM ,0comments
နွေရာသီမွန်စာပေသင်တန်းများ၌ ရိုးရာအကများပါ သင်ကြားပေးရန် ကော်မတီမှစီစဉ်
မွန်တိုင်းရင်သားများအနေနှင့် မွန်စာပေနှင့် မွန်စကား တတ်မြောက်မှု အလွန်နည်းပါးလာသည့်အတွက် သာကေတ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ထန်းတပင်အစရှိသောမြို့နယ်ပေါင်း ၃၀ ၀န်းကျင်၌ နွေရာသီ မွန်စာပေသင်တန်း များအား ပြုလုပ်နေပြီး မွန်စာပေ၊ စကား သာမကပဲ မွန်ရိုးရာအကများပါ သင်ကြားပေးမည်ဟု မွန်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ (ရန်ကုန်) ဒု-ဥက္ကဌ ဒေါ်မိကွန်ချစ်ချစ် ကပြောသည်။
“မွန်စာပေနဲ့ မွန်စကားတတ်တဲ့သူတွေ တော်တော်လေးနည်းလာတယ်။ ကျွန်မတို့ မွန်စာပေတွေ မွန် စကားတွေ မေ့ကုန်မှာကြောက်လို့ နွေရာသီ မွန်စာပေသင်တန်းတွေ ဖွင့်ထား တယ်။ သုံး လေး နှစ် အတွင်းမှာ တော်တော်လေးတော့ အရှိန်ရလာပါတယ်။ မနှစ်ကဆို နယ်မြေသုံးဆယ်လောက် ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မွန် ရိုးရာအကတွေ ပါသင်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။” ဒု ဥက္ကဌ ဒေါ်မိကွန်ချစ်ချစ် ကပြောသည်။
မြန်မာဖတ်စာမှ မွန်ဖတ်စာသို့ ဘာသာပြန်ရာ၌ သဘာဝခြင်း မတူညီသောကြောင့် အခက်အခဲရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး မွန်စာပေအား အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သင်ကြားခွင့်ရနိုင်မည် မဟုတ်ဟု ၎င်းကပင်ပြောသည်။
“အရင်ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က ၄ တန်းထိ မွန်ကျောင်းတွေမှာ မွန်စာသင်ရတယ်။ အရင်ကတည်းက မွန်ဖတ်စာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်ကနေ အဲ့ဒါကို မယူဘူး။ မြန်မာဖတ်စာကို မွန်လိုဘာသာပြန်ရတာဆိုတော့ မွန်ဖတ်စာနဲ့ သဘာဝခြင်းမတူတော့ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဖို့ ခက်တယ်။ သင်ရိုးကို ပြန်ပြုစုဖို့တော့ လုပ်ထား တာပေါ့နော်။ ဘယ်တော့ စသင်နိုင်မယ် ဆိုတာ မသိသေးဘူး။” ဟု မွန်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ (ရန်ကုန်) ဒု ဥက္ကဌ ဒေါ်မိကွန်ချစ်ချစ် ကပြောသည်။
မွန်စာပေမှာ ကိုလိုနီလက်ထက်ကျောင်းများတွင် ဘာသာတစ်ရပ်အနေနှင့် သင်ကြားခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ယခုလို အချိန်၌ မွန်စာပေအား ပြန်လည်သင်ကြားခွင့် ပြုသင့်ကြောင်းကိုလည်း (၆၆) နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့တွင် မွန်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဌနိုင်ဖေသိန်းက ပြောသွားသည်။.
“မွန်စာသမိုင်းမှာလည်း ကျန်စစ်သားမင်းလက်ထက်ထိ မွန်စာပေကိုသုံးစွဲးခဲ့ပါတယ်။ မွန်စာပေကို ကိုလိုနီ လက်ထက်ကျောင်းတွေမှာ ဘာသာတစ်ရပ်အနေနဲ့ သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ထွန်းသိန်း ဟာဆိုရင် အရင်က မွန်ပညာအုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုလိုနီလက်ထက်က တိုင်းရင်းသားစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုကို မပျောက် ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး အခုကောင်းသောအစိုးရ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ လက်ထက်မှာဆိုရင် ဒီလို အခွင့်အရေးကိုပေးသင့်ပါတယ်လို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။” ဟု မွန်အမျိုးသားနေ့ ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နိုင်ဖေသိန်းက ပြောသည်။.
ယခင် ဦးနေ၀င်းအစိုးရလက်ထက်၌ မွန်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဓါတုဗေဒ၀န် နိုင်ချစ်ကောင်းမှ ကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်၍ မှုလတန်းကျောင်းများတွင် မွန်တိုင်းရင်းသားများ မွန်စာပေ သင်ကြားနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှစ၍ သင်ကြားခွင့် မရရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။
“အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် အိမ်တွေမှာလိုက်ပြီး သင်ပေးတာတွေရှိတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ ဆရာမတွေက ရပ်ကွက်ထဲက မွန်တိုင်းရင်းသားတွေကို လိုက်စုပြီးတော့ မွန်စာတွေကိုကြိုး စားပြီးသင်ပေးနေပါတယ်။ အရင်က မွန်စာပေကို ကျောင်းတွေမှာတစိတ်တပိုင်း သင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ရချင်ပါတယ်။” ဟု မွန်တိုင်းရင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သူ မိနွန်ထောက ပြောသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 5:12 PM ,0comments
ဈေးကွက်အတွင်း Nissan ပစ္စည်းရှား၍ ၀ယ်ယူလိုသူများ အခက်တွေ့
ရန်ကုန်ကားအရောင်းပြခန်းဈေးကွက်၌ Toyota ၊ Suzuki နှင့် Honda ကားအမျိုး အစားများမှာ အမျိုးအစား စုံလင် စွာတွေ့ ရသော်လည်း Nissan ကားအတွက်မှု စုံလင်စွာ မရှိသည့်အတွက် ကားဝယ်သူများအခက်တွေ့နေကြောင်း သိရသည်။
``အရင်တုန်းကတော့ ကားစီးမယ်ဆိုရင် Caldina တို့ Prado တို့လို၊ Toyota တို့ Suzuki တို့လောက်ပဲ သိကြတယ်၊ တခြားကားအမျိုးအစားဝယ်ချင်တဲ့သူတွေ ကလည်း အဲဒီကားအမျိုးအစားအကြောင်းကို နားမလည်တော့ ကိုယ်နားလည်တဲ့ ကားတွေမှာပဲလည်နေကြတယ်´´ ဟု နှစ် ၂၀ ကျော် ကား အကျိုးဆောင် ကိုဇော် က ပြောသည်။
ယခုနောက်ပိုင်း လူကြိုက်များသည့် Toyota၊ Suzuki နှင့် Honda ကား ကုမ္မဏီများမှ ကားအမျိုးအစားမျိုးစုံ တင်သွင်းလာကြသည်။ ယခုနောက်ပိုင်း ၄င်း ကားများအား ၂၀၁၀ မော်ဒယ်အထိ တန်ဖိုးကြီးကားများ တင်သွင်းလာကြသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အကုန်တွင် ကားတင်သွင်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင် ရာမှ ဖြေလျှော့မှုများများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ကားဈေးကွက် အတွင်း အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ကားအမျိုးအစုံ တင်သွင်းလာခဲ့ကြသည်။
``၂၀၁၀ တို့လို Latest Model တွေကျတော့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲ ၀ယ်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Toyata ၊ Suzuki တို့လို ကားတွေပဲ များတယ်၊ တခြား ကားတွေ သိပ်မများကြဘူး၊ အခုနောက်ပိုင်း ကားလာဝယ်ပြီဆိုရင် အရင် ကလို အူတူတူတွေ မဟုတ်ကြတော့ဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေ ၀ယ်သူတွေကတောင် ကားအကြောင်း ပိုသိလို့ ကိုယ်က ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်နေရတာတွေတောင် ရှိတယ်´´ ဟု သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ Car Show Roomမှ မန်နေဂျာ ကိုမင်းထက်ကိုက ပြောသည်။
သို့သော် Nissan ကားများသည် Car Show Room များတွင် ရောင်းချမှု အားနည်းနေပြီး ကားအမျိုးအစား မစုံလင်မှုကြောင့် အဆိုပါကားအမျိုးအစား ၀ယ်ယူလိုသည့် ၀ယ်လက် များအတွက် အခက်အခဲရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
``ကျွန်တော် အခုထိ Nissan Safari (2007 Model) လိုချင်လို့ လိုက်ရှာနေတာ မတွေ့သေးဘူး၊ တွေ့တော့လည်း ကားက Second Hand ပဲရှိတယ်၊ ကားသွင်းတဲ့ ကုမ္မဏီကို သွားမေးတော့လည်း သူတို့က ဒီကားတွေဘက်ကို မချိတ်ထားဘူးတဲ့၊ Car Show Room ဆိုတာ ကားအမျိုးအစား စုံအောင် လုပ်ထားသင့်တယ်´´ ဟု Nissan ကားအမျိုးအစား ၀ယ်ယူလိုသူ ကိုအာကာမှ ပြောသည်။
အထူးသဖြင့် Nissan ကားအမျိုးအစားများတွင် Safari(4700 CC) ၊ Teranno Regulus(3200 CC)၊ Cedric(2500 CC) ကဲ့သို့သော မော်ဒယ်မြင့်ကားများ Car Show Room များတွင် မရှိသလောက် နည်းပါးကြောင်း ကားဝယ်ယူ လိုသူများနှင့် Car Show Room များမှ သိရသည်။
``ကျွန်တော်တို့ Car Show Room တွေက Customer တွေကို ဦးစားပေး တယ်ဆိုပေမဲ့ အနည်းနဲ့ အများဆိုရင်တော့ အများကိုဦးစားပေးမှာပဲ၊ လူနည်းစုက ၀ယ်ချင်တဲ့ Nissan ကားတွေထက် လူကြိုက်များ လူဝယ်များတဲ့ကားတွေပဲ သွင်း တာ သဘာဝပဲလေ´´ ဟု သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် Car Show Room တစ်ခုမှ ကိုမင်းထက်ကိုမှ ပြောသည်။
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့ထိ စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော စာရင်းများ အရ ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်များမှာ လူစီးယာဉ် (၁၀၅၇၉၈) စီး၊ ဘတ်စ်ကား (၁၄၃၇) စီး၊ ကုန်တင်ယာဉ် (၆၁၅၁) စီး စုစုပေါင်း (၁၁၃၃၈၆) စီး ရှိသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 5:02 PM ,0comments
ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍအတွက် နံပါတ်အပြာသုံးရမည်ဖြစ်သော်လည်း နံပါတ်နက် အသုံးပြုမှုများနေ
ပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလာရေးဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍအတွက် မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဋ္ဌာနတွင် လိုင်စင်လျှောက်ပြီး နံပါတ်အပြာ များကိုသာ အသုံးပြုခွင့်ပြု ပေးထားသော်လည်း၊ တရားဝင် အသိမှတ်ပြု ထားခြင်းမရှိသည့် နံပါတ်အနက်နှင့် အနီရောင်များကိုပါ အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဋ္ဌာနက နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားလာရေး ၀န်ဆောင်မှု ကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုရမည့် ကားများကို လိုင်စင်လျှောက်ထားပြီး နံပါတ် အပြာများနှင့် တရားဝင်သတ်မှတ်ပေးထားကြောင်း ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် အဆိုပါတရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ကားများကိုသာ သုံးစွဲသင့်ကြောင်း၊ သုံးစွဲကြ ရန်လည်း ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဟိုတယ်ဇုန်များ အလိုက် ပညာပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန၊ မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဋ္ဌာနမှ ပြောဆိုချက် အရ သိရှိရသည်။
`သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကားနံပါတ်ပြား အပြာတွေကတော့ တရားဝင်တာပေါ့၊ ခုတော့ နံပါတ် နက်တွေကိုလည်း ရောသုံးနေတာပဲ၊ ၀န်ကြီးဋ္ဌာနကလည်း ဘာမှ အရေးယူတာတွေ မလုပ်တော့ ဒီလိုပဲ သုံးနေကြတာပဲ။ ဧည့်သည်အ၀င်များပြီး ကားရှားနေလို့လည်း ခုလို သုံးနေကြတာပါ`ဟု Myanmar Tourism ServiceCompany မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်အတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှုများနေသောကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသော ကားရှားပါးခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့နေ ရသောကြောင့် နံပါတ်အနက်နှင့် တခါတရံ နံပါတ်အနီများကိုပါ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်လာကြောင်း ကားငှားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ ခရီးသွားကုမ္ပဏီများထံမှ သိရသည်။
“အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားသား ၀င်လာတာကလဲ တစ်နေ့တစ်နေ့များ လာတယ်။ ကားအငှား ကုမ္ပဏီတွေလည်း ပိုများ လာတယ်ဗျ၊ ငွေကြေး တတ်နိုင် သှုတွေက ဒီ Tour ကားငှားတာတွေကို စီးပွားရေုးတစ်ခုလို လုပ်လာကြတာ” ဟု ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ Tour ကားငှားခြင်းလုပ်ငန်းတွင် နှစ်ချုပ်၊ လချုပ်အပြင် တနေ့ချင်း အငှားလိုက်ခြင်းများလည်းရှိပြီး ကားငှားခနှုန်းထား များကို ကားအမျီုးအစားအပေါ် မှုတည်၍သော် လည်း ကောင်း၊ ခရီးအကွာအဝေးလမ်းကြောင်းအပေါ်တည်၍လည်းကောင်း ကားငှားခ နှုန်းထားများအပြောင်းအလဲရှိကြောင်း ကားငှားရမ်းသူများထံက သိရှိရသည်။
အငှားလိုက်နေသော ကားအမျိုးအစားများမှာ ရွှေငါး၊ Mark II၊ Alphard၊ SuperCustom၊ Hi-Ace၊ Crown၊ မာစီဒီး စသည့်ကား အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံခြားသား လူအရေအတွက်နဲ့ ပိုက်ဆံသုံးနိုင်အပေါ် မူတည်ပြီး Tourကုမ္ပဏီတွေက ငှားတာပါ။ တချို့ နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆို မာစီဒီး အထိတောင် တောင်းဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်”ဟု နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကားငှားရမ်းသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားကဏ္ဍ၀န်ဆောင်မှု ပေးရန်အတွက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဋ္ဌာနတွင် လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်ကို တွန့်ဆုတ်နေရခြင်းမှာ ခရီးသွားရာသီမှာ ၆ လခန့်သာရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
`ခရီးသွားရာသီက ၆လ ဆိုတော့ နောက်၆လမှာလုပ်ငန်းက နားထားရတယ် ၆ လပဲ အလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ လိုင်စင် လုပ်ထားရင် တိုးအတွက်ပဲ သီးသန့် လုပ်ထားရသလို ဖြစ်နေ တယ်၊ အဲဒါကြောင့် မလျှောက်ချင်တာပါ`ဟု ကားငှားရမ်းသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကားနံအပြာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်များအား လုပ်ကိုင်ရမည့် ကာလနှင့် နှိုင်းစာရှောင်တိမ်းလိုခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ နံပါတ်အနက်များကို အလျင်း သင့်သလို အသုံးပြုမှုများနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု ကားအငှားဈေး ကွက်အတွင်းမှ သိရသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 4:56 PM ,0comments
မြန်မာနိုင်ငံမှအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းသော ထုပ်ပိုးစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအနက်မှ အမှတ်တံဆိပ်မပါသော ကုန်ပစ္စည်း များ၊ တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်မရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်လုပ်သူအမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်လုပ်သည့် အမှတ်စဉ်နှင့် ရက်လွန် ရက်စွဲမပါဝင်သော ကုန်ပစ္စည်းများအား အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်သည်။
ဤအမိန့်ကြေငြာစာကို ရမ်မူဘက်၊အိန္ဒိယ ကျန်းမာရေးနှင့် မိသားစုလူမှုဖူလုံရေး အတွင်းရေးမှူး၊ စားသောက်ကုန်များအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဥက္ကဌမှ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၇)ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တင်သွင်းခွင့်အပိတ်ပင်ခံရသော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ Mikko Nutritious Cereal ( High Calcium )-25kg,Mikko (3in 1 instant coffee mix ),ကြော်လှော်ထားသော ထုပ်ပိုးအစား အသောက်များ၊နို့ နှင့်နို့ထွက်စားသောက်ကုန်များ နှင့် ကြာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ထားသော အသီးနှင့် ငါးများ ပါဝင်ကြောင်း အိန္ဒိယအွန်လိုင်း မီဒီယာ E- PAO.netမှ သတင်းထုတ်ပြန် ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ ထုပ်ပိုးစားသောက်ကုန်များကို ပိတ်ပင်ရခြင်းမှာ အိန္ဒိယ စားသောက်ကုန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဥပဒေ ၂၀၀၆ခုနှစ်မှ အမှတ် ၂၅ နှင့် ၂၆ ကို ၎င်း၊ အိန္ဒိယ စားသောက်ကုန် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဥပဒေ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှ အမှတ် ၂၂ ကို ၎င်းဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အမိန့်ကြေငြာစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အိန္ဒိယ စားသောက်ကုန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဥပဒေ၂၀၀၆ခုနှစ် အမှတ်စဉ် ၂၆တွင် ထုတ်လုပ်သူသည် မိမိ စားသောက်ကုန်၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စားသောက်နိုင်မှုကို တာဝန်ယူရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
လက်ရှိ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသာ သဘောကျသည်ဟုဆိုသည့် ရေလောင်းရွာသားများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရေလောင်းအုပ်စု ရွာသစ်ကလေးကျေးရွာ၌ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသစ် ရွေးချယ်တင်ြှေမှာက်မည်ဆိုပါက ကျေးရွာခံများက ကန့်ကွက် သွားမည်ဟု ဒေသခံများထံက သိရသည်။
“အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးပွဲစလုပ်ကတည်းက (၇)ကြိမ်ရှိပြီ အလုပ်အကိုင်ပျက်ရတယ်။ အတိအလင်း မြို့နယ်က ဆင်းတာတော့ နှစ်ခါရှိပြီ။ အခုဟာက(၂၀၁၁)နှစ်ကတိုင်ထားတဲ့ တိုင်စာ ကြောင့်ဆိုပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြန်ရွေးမယ်လို့ ဆိုတယ်။ တင်တုန်းကလည်း ခရိုင်က မစစ်ဆေးဘူး၊ အောက်ခြေကနေတင်တယ် ပြီးရင် မြို့နယ်ကနေ ရွေးထားတာ ဖြုတ်ရင် အရင်လုပ် တဲ့ဥက္ကဌကတည်းက ဖြုတ်လေ ဘာလို့ တင်မြောက်ပြီးမှ ဘာလို့ ဖြုတ်ချတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ အခုဟာက အထက်ကလည်း မပြတ်သားလို့ အောက်ကရွာတွေပဲ ပဋိပက္ခဖြစ်တော့မယ်။” ဟု ရေလောင်ကျေးရွာမှ ဆယ်အိမ်မှူးဖြစ်သူ ဦးရဲဝင်းကပြောသည်။
ရေလောင်းရွာမှ လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခင်မောင်ငြိမ်းအား ၂၀၁၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းက ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့်အညီရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ကြောင်း ကျေးရွာမှလည်း သဘေတူစွာနဲ့လက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ်က တိုင်စာကိစ္စမှာလည်း အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား မြို့နယ်မှခေါ်ယူတွေ့ပြီး ဖြေရှင်းပေးခဲ့ကြောင်း ရေလောင်ရွာခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါတိုင်စာမှာ တောင်သူတွေများမှ လျော်ကြေးမရသည့် မြေကွက်များကို ကျေးရွာဥက္ကဌမှ အထက်ကို အကြောင်း မကြားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်စာဖြစ်ကြောင်း ရေလောင် ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် လက်ရှိ ဥက္ကဌကိုသာ ခန့်ထားစေချင်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောပြသည်။
“ ဘိုင်လေး(ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)က ၂၀၁၁ ခုနှစ်တိုင်စာကြောင့် ပြန်ရွေးရတယ်လို့ ပြောတယ်။ မြို့နယ်ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောတယ်။ ပြန်လည်လုပ်တာ ရွေးတာ သုံးကြိမ်ရှိပြီ။ ၁၉ ရက် ၁၂လ ၂၀ ၁၂တုန်း က တစ်ခါ ပြန်ရွေး တယ် ၂၀ မှာအတည်ပြုတယ် ၂၂ရက်မှာ အတည်ပြုတာ အခုမြို့နယ်ကနေ တိုင်စာရှိ လို့ ပြန်လည်ရပ်နားတယ်လို့ ဘိုင်လေးကပြောတယ်။” ဟု ဆယ်အိမ်မှူး ဦးစိုးလွင် က ပြောသည်။
ရေလောင်ကျေးရွာသို့ မြို့နယ်အကြီးအကဲတစ်ချို့လာရောက်ခဲ့သော်လည်း ရွာခံများကန့်ကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခဲ့သောကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာပြော ဆိုခြင်း မရှိပဲ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားကြောင်း ငြိမ်သက်သောအချိန်မှသာ လာရောက် ရွေးကောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦး၏ ပြောဆိုမှုအရ သိရသည်။
ရေလောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၏ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ၎င်းအနေဖြင့်ရေလောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ မသိရှိကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 4:46 PM ,0comments
CPU နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးကတ်များ စတင်အသုံးပြုနိုင်
နိုင်ငံတကာသုံး ငွေကြေးကတ် CPU ကတ်များအား MPU Network ချိတ်ဆက်ထားသော ATM စက်များနှင့် ငွေပေးချေနိုင်သည့် နေရာများတွင် ယခုလနောက်ဆုံးအပတ်မှ စ၍ သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Payment Union Card ကိုင်ဆောင်ပြီး ပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သူများအနေဖြင့် ငွေကြေး သယ်ယူစရာ မလိုဘဲ MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များ၏ ATM စက်များတွင် မြန်မာကျပ် ငွေထုတ်ယူ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သလို ဟိုတယ်နှင့် အခြားဝန်ဆောင်ခများအတွက်လည်း CPU ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေ နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
“အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ အလည်အပတ် ဖြစ်ဖြစ် လာရောက်သူတွေက MPU ရဲ့ POS စက်တွေမှာ ငွေပေးချေနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု MPU အတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်းဦးက ပြောသည်။
Myanmar Payment Unioin ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဗဟိုဘဏ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်(၃)ဘဏ်အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် (၁၄)ဘဏ် စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင်ဘဏ် (၁၇)ဘဏ်နှင့် စတင် ဖွဲ့စည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့ က အဖွဲ့ဝင် ဘဏ်များမှ MPU Debit Card များအား ပြည်တွင်း ၌ သုံးစွဲ နိုင်ရန် ထုတ်ဝေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ Sea Game ကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပ ရမှာ ဖြစ်တယ် CUP နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာကတ်တွေ သုံးစွဲနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု MPU အတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်းဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ ပည်တွင်း MPU Network အတွင်း အဖွဲ့ဝင် ဘဏ်များ ATM စက် စုစုပေါင်း ၁၉၈ လုံးနှင့် POS စက် ၄၆၅ လုံးရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ China Union Pay သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည်မှာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၁ နိုင်ငံမှာ CUP ကတ်များ လက်ခံသုံးစွဲလျက် ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပကိုသွားပါက ပြည်တွင်းဘဏ်ထုတ် Union Pay Card (Debit Card) များကို ကိုင်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာ၌ သုံးစွဲနိုင်အောင်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
ရခိုင် ကဏန်းပျော့လုပ်ငန်း ပိုမိုအောင်မြင်ရေး အစိုးရမှနည်းပညာနှင့် အရင်းအနှီးပံ့ပိုးရန်လိုအပ်နေ
ရခိုင်ဒေသ ကဏန်းပျော့လုပ်ငန်းမှာ အောင်မြင်မှု အထိုက်အလျောက် ရရှိနေသော်လည်း ယခုထက်ပိုမို အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ အနေဖြင့် နည်းပညာနှင့် အရင်းအနှီးများ ပံ့ပိုးရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့ နယ်မှ ကဏန်းပျော့ ကုမ္ပဏီ များက ဆိုသည်။
"ကျနော်တို့ရခိုင်ဒေသ ကဏန်းပျော့လုပ်ငန်းက အောင်မြင်မှုရှိနေပေမယ့် လုပ်ငန်းပိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် နည်းပညာနဲ့ အရင်းအနှီးတွေကို အစိုးရကပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ် မယ်။ ရခိုင်မှာ အရင်က ကဏန်းပျော့လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ကျနော်တို့ ရွှေကျောက်ဖြူကုမ္ပဏီပဲ ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းကျမှ တရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ရွှေငါးကုမ္ပဏီ ရောက်လာတာပါ။ စလုပ်တဲ့အခါ နည်းပညာအားနည်းမှုကြောင့် ငွေကြေး အကုန်အကျ အရမ်းများခဲ့ပါတယ်" ဟု ရွှေကျောက်ဖြူကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းမန်နေဂျာ တစ်ဦးကပြောသည်။
နည်းပညာအားသာချက်ကိုလိုက်၍ ကဏန်းအမာမှ အပျော့လုပ်ရာတွင် အချိန် နှင့် အသုံးစရိတ်သက်သာ စေသဖြင့် နည်းပညာကောင်းရရှိရန်မှာလည်း လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးမှာ အခရာကျ ကြောင်းရခိုင် ကဏန်းပျော့ လုပ်ငန်းရှင်များကဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ကဏန်းပျော့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ရွှေကျောက်ဖြူနှင့်ရွှေငါးကုမ္ပဏီနှစ်ခုသာရှိပြီး၊ ယင်းကုမ္ပဏီ များမှာလည်း ကျောက်ဖြူ တစ်မြို့တည်း တွင်သာရှိသည်။ ထိုသို့ကဏန်းပျော့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူနည်းပါးရခြင်းမှာ လုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာအပါအ၀င် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ စိုက်ထုတ်လုပ်ကိုင် နိုင်ခြင်း မရှိ၍ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ကဏန်းပျော့လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက် အနည်းဆုံး မြေ(၁၀)ဧက လိုအပ်တယ်။ ကဏန်းအမာတွေကို သိမ်းဆည်းထားရှိမယ့် ပလပ်စတစ် ကဏန်းအိမ် တစ်လုံးကို ငါးရာ ကျပ် နှုန်းနဲ့ ကဏန်းအိမ် အလုံးပေါင်း တစ်သိန်းခန့် အခြေခံ လိုအပ်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကဏန်းအမာတစ်ကောင်ကို တစ်ရာ ကျပ်ဈေးနဲ့ ကောင်ရေ တစ်သိန်း အတွက်ငွေပမာဏအပြင်၊ အဆောက် အဦးတွေဆောက်လုပ်ရမယ့်စရိတ်၊ ကဏန်းထိန်းကန်တွေ တူးဖော်ရမယ့်စရိတ်၊ ကဏန်းစာ ၀ယ်ယူမယ့်စရိတ်၊ Compressor၊ Freezer ၀ယ်ယူရမယ့်စရိတ်တွေ နဲ့ အနည်းဆုံးခန့်ထားရမယ့် ၀န်ထမ်း လေးဆယ်အတွက် လစာငွေ စတဲ့ အရင်းအနှီးတွေက ကဏန်းပျော့ လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ရာမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်"ဟု အဆိုပါ ရွှေကျောက်ဖြူ ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျာက ရှင်းပြသည်။
ကျောက်ဖြူ မြို့ရှိ ကဏန်းပျော့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသို့ ကျောက်ဖြူ၊ အမ်း၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ရမ်းဗြဲ၊ တောင်ကုတ် မြို့နယ်များမှကဏန်းဖမ်းရေလုပ်သားများ လာရောက်ရောင်းချသည့် ကဏန်းမာများကို ကဏန်းအိမ် တစ်လုံးမှာတစ်ကောင်ကျစီထည့်ပြီးပြီး၊ရေငန်ဖြည့်ထားသည့် ကဏန်းမွေးကန်မှာ ထားပေးရသည်။ အစာကို
တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ကျွေးရသလို၊ ၂နာရီတစ်ကြိမ်ကျစီ ကဏန်းအိမ်တွဲများကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ရင်း အရေခွံလှဲထားတဲ့ ကဏန်းပျော့ကို ရှာဖွေရသည်။
ကဏန်းမာကနေ အပျော့ဖြစ်နေသော ကဏန်းကို တွေ့လျင်တွေ့ချင်း ဆယ်ယူပြီး၊ ရေချိုမှာထည့်ပြီးတော့ Compressor ဖြင့် အောက်စီဂျင်ပေးရသည်။ ရေအငန်ဓာတ် သန့်စင် သွားပြီးသည့်အခါ Freezer ထဲမှာထည့်ပြီး အအေးခံထားရသည်။ Freezer ထဲမှာလိုအပ်သည့် ကဏန်းအရေအတွက်ပြည့်သည်နှင့် ကျောက်ဖြူ အအေးခန်းစက်ရုံကို သယ်ယူကာ ထိုမှတဆင့် အအေးခန်းကားဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ပို့ဆောင် ပေးကြသည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ကဏန်းပျော့များကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ၃ တန်ဆန့် အအေးခန်းကားများဖြင့် သယ်ယူပြီး၊ နိုင်သိင်္ဂီထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် အအေးခန်းစက်ရုံတွင် ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားကာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ ရောင်းချခြင်းရှိသလို၊ ပြည်တွင်း၌လည်း ရန်ကုန်မြို့ ဟိုတယ်ကြီးများတွင် ဖြန့်ချီရောင်းချကြကြောင်းလည်း သိရသည်။
"ကဏန်းတွေကိုလေကြောင်းနဲ့တင်ပို့တော့အချိန်တိုတိုနဲ့ဝယ်သူတွေဆီကိုရောက်တယ်။အသေအပျောက်လဲ နည်းတယ်။ လတ်ဆတ်မှု ရှိတဲ့အတွက် ဈေးပိုရတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်က ဏန်းပျော့တွေကို တချို့က လေယာဉ်နဲ့ပို့နေသလို၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကတဆင့် ပို့တာလည်းရှိတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ တင်ရင် လေယာဉ်စရိတ်ကကြီးလွန်းတော့ ကျနော် တို့ရခိုင်ကတော့ သင်္ဘောနဲ့ပဲသယ်ပါတယ်"ဟု ရန်ကုန်ဖြန့်ချီရေး
တာဝန်ခံ ကိုမောင်မောင် က ပြောသည်။
ရန်ကုန် ကဏန်းပျော့က တရုတ်နှင့်ထိုင်းဈေးကွက်တွင် နေရာယူထားပြီး၊ ရခိုင် ကဏန်းပျော့ကို ဂျပန်ဈေးကွက် တွင်သာ ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ ရခိုင်ကဏန်းပျော့မှာ ပြည်ပ ဂျပန်ဈေးကွက်တွင်သာမက၊ ပြည်တွင်း ရန်ကုန် ဈေးကွက်မှာ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၊ ဟိုတယ်နီကိုးလ် အစရှိသည့် ဟိုတယ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်သို့ ဖြန့်ချီ ရောင်းချ ရာတွင်လည်း အောင်မြင် နေကြောင်း သိရသည်။
"Sea Food တွေ ထဲမှာ ရခိုင်ကဏန်းပျော့ဟာ ဥရောပတိုက်သားတွေ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်၊ ရန်ကုန်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာတောင် ရခိုင် ကဏန်းပျော့ တစ်ကောင်ပါတဲ့ ကဏန်းပျော့ပေါင်းတစ်ပွဲကို မြန်မာငွေ သုံးထောင်ကနေ ငါးထောင်ထိ ရောင်းပန်းလှနေတယ်"ဟု ရန်ကုန် ဖြန့်ချီရေးကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်ဈေးကွက်တွင်ရခိုင်ကဏန်းပျော့တစ်ကီလိုဝင်ရှစ်ကောင်လျှင် ၈၀၀၀ကျပ် ၊တစ်ကီလိုဝင် ၁၂ကောင် လျှင် ၅၀၀၀ကျပ်အထိ ပေါက်ဈေးရှိနေပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏၀ယ်ယူအား ကောင်း၍ အမြတ်အစွန်း ကောင်း သော်လည်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနေသည်ဟုသိရသည်။ လက်ရှိ ပြည်ပဈေးကွက်တွင် ကဏန်းပျော့ တစ်တန်လျှင် ပျှမ်းမျှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ကျော် ဈေးပေါက်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ရခိုင်ဒေသ ကဏန်းပျော့လုပ်ငန်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ရွှေကျောက်ဖြူကုမ္ပဏီက ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ချီကျွန်းတွင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး၊ ရွှေငါးကဏန်းပျော့ကုမ္ပဏီကမူ တရုတ်လူမျိုး ဦးဆောင်လျက် ကျောက်ဖြူမြို့ ငလပွေ့ချောင်းဖျား တောင်ရှည်ကျေးရွာအနီးတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံက တင်ပို့သော ကဏန်းပျော့များကို ကုန်ကြမ်းအတိုင်း တင်ပို့မှုထက် တန်ဖိုးမြင့် ထုတ်လုပ် တင်ပို့သင့်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ကဏန်းများမှာ သဘာဝမှ ဖမ်းဆီးတင်ပို့နေခြင်း ဖြစ်သဖြင့် တချိန်ချိန်တွင် သဘာဝရင်းမြစ်များ ကုန်ခမ်းသွားနိုင်ကာ၊ သယံဇာတ ထိန်းသိမ်းသည့်အနေဖြင့် ၁၀၀ဂရမ်အောက် ကဏန်းသေးများ တင်ပို့နေမှုအား ကိုယ်တိုင် အသိ စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပြုပြင်သွားသင့်ကြောင်း ကဏန်း လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌဦးနှင်းဦးကပြောသည်။
၂၀၁၂/၂၀၁၃ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလအထိ၊ရန်ကုန်ဏန်းပျော့လုပ်ငန်းရှင်များမှလေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ပြည်ပသို့ ကဏန်းများတင်ပို့မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂.၆၃၁သန်း၊ တန်ဖိုးမြှင့်ကုန် အဖြစ် ထုတ်လုပ် တင်ပို့မှုမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈.၃၀၈သန်း၊ မူဆယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅.၇၄၆သန်း၊ မြ၀တီနယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးစခန်းမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၀၁၅သန်း၊ ကော့သောင်းနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၁၉၉သန်း ၊ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၇.၃၈၃သန်း
ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနဌာနခွဲမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအတွင်း အဆိုးဝါးဆုံး ဆီးနှင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကာလအတွင်း အဆိုးဝါးဆုံး ဆီးနှင်းမုန်းတိုင်းတစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့က ထူထပ်ပြင်းထန်စွာ ကျဆင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယခုအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း အဆိုးဝါးဆုံးသမိုင်းဝင်မည့် ဆီးနှင်းမုန်တိုင်း (Blizzard) ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တက္ကဆက်ပြည်နယ် အမာရီလိုမြို့တွင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ နေထိုင်လာခဲ့သည့် မနန္ဒာဝေက အာရ်ကန်တိုင်းမ်စ်သို့ပြောသည်။
" ကျမ ဒီပြည်နယ်မှာ အခြေချနေထိုင်လာခဲ့တာဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ကြာမြင့်ပါပြီ။ ဒီလောက်ဆိုးဝါးစွာ ကျဆင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းမျိုး တစ်ခါမှ မကြုံခဲ့ပါဘူး။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ မော်တော်ယဉ်လမ်းကြော၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ်၊ အစိုးရရုံး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကောလိပ်၊ ဆေးရုံဆေးခန်းနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေထိ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ဒီအကြိမ်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ " ဟု ပြောသည်။
ဆီးနှင်းမုန်းတိုင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ဖက်ခြမ်းပြည်နယ်နှင့် အလယ်ပိုင်းပြည်နယ် တက္ကဆက်စ် (Texas)၊ ကင်ဆာ့စ် (Kansas)၊ အော်ကလာဟိုးမား (Okalahoma) နှင့် မီစ်ဆော်ရီ (Missouri) ပြည်နယ်များတွင် ကျဆင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး တက္ကဆက်ပြည်နယ် အမာရီလိုမြို့တွင် ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းများ (၅ ) လက်မခန့်ထိ ထူထပ်စွာ ကျဆင်းတိုက်ခိုက် ခဲ့ခြင်းကြောင့် မော်တော်ယဉ်လမ်းကြော၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ်၊ အစိုးရရုံး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကောလိပ်၊ ဆေးရုံဆေးခန်း၊ ဈေးဆိုင်ခန်းများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆီးနှင်းမုန်တိုင်း ပြန်းထန်စွာ ကျဆင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမာရီလိုမြို့တွင် သစ်ပင်များ ကျိုးကျပျက်စီးမှုကြောင့် လျပ်စစ်မီးကြိုးများပြတ်တောက်ကာ ဈေးဆိုင်နှင့် လူနေအိမ် တစ်ချို့ နာရီအတန်ကြာ လျပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုများရှိခဲ့သည်။
မော်တော်ယဉ်လမ်းကြော၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ်၊ အစိုးရရုံး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကောလိပ်၊ ဆေးရုံဆေးခန်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့် အမာရီလို အော်ကလာဟိုးမား ပြည်တွင်းအဝေးပြေး လမ်းမကြီး (Interstate Street 40) ကို တနင်္လာနေ့မှ အင်္ဂါနေ့ထိ နှစ်ရက်တိုင်တိုင် ပိတ်ပင်ထားခဲ့ရပြီး တက္ကဆက်စ် (Texas) ပြည်နယ်၊ ကင်ဆာ့စ် (Kansas) အော်ကလာဟိုးမား (Okalahoma) နှင့် မီစ်ဆော်ရီ (Missouri) ပြည်နယ်တို့တွင် လေယာဉ်ခရီးစဉ် နှစ်ထောင် (၂၀၀၀) နီးပါး အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်းထားခဲ့ရကြောင်း ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းမှတ်တမ်းများ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
အမာရီလိုမြို့လမ်းမများပေါ်တွင် အိမ်စီးကားများနှင့် ဟိုက်ဝေးလမ်းမပေါ်တွင် လော်ရီကားအကြီးများ ဆီးနှင်းရေခဲများကြားတွင် နှစ်မြုပ်သွားခဲ့ရပြီး ဇေယျသုခ မြန်မာထေရ၀ါဒ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝန်းတစ်ခုလုံး ဆီးနှင်းရေခဲများလွှမ်းခြုံသွားခဲ့ရကာ ဆရာတော် သံဃာတော်များသည် ၂၅ ရက် တနင်္လာနေ့က ကျိန်းစက်တော်မူသည့်ကျောင်းဆောင်မှ ဆွမ်းစားဆောင်သို့ ကြွရောက်ကာ မွန်းတည့်ဆွမ်း သုံးဆောင်ရန်အတွက်ပင် အခက်အခဲရှိခဲ့ကြောင်း အမာရီလိုမြို့မြန်မာထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးညီညီလွင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းသည် ၂၅ ရက် တနင်္လလာနေ့ နှောင်းပိုင်းတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ဖက်ခြမ်းပြည်နယ်နှင့် အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်များမှ အရှေ့ဖက်ခြမ်းရှိ ချီကာဂို (Chicago) ပြည်နယ်သို့ ရွှေ့လျားသွားခဲ့ကြောင်း မိုးလေ၀ါသ ကြိုတင်ခန့် မှန်းချက် သတင်းများအရ သိရှိရပြီး လမ်းတံတားများတွင် ပိတ်ဆို့နေသည့် ဆီးနှင်းရေခဲများကို သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးဌာနနှင့် မီးသတ်ဌာနများမှ ခေတ်မှီစက်ပစ္စည်းကရိယာများနှင့် ဆေးဝါးများအသုံးပြုကာ အင်အားသုံး ရှင်းလင်းဖယ်ထုတ်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကျောက်ပုဇွန်လုပ်ငန်းမှာ ပြည်ပဈေးကွက်အဖြစ် သီးသန့်ရပ်တည်နိုင်၊ ဒေါ်လာပုစွန်ဟု ခေါ်နိုင်ကြောင်းပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရေလုပ်ငန်းများထဲတွင် ကျောက်ပုဇွန်လုပ်ငန်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်၍ ပြည်ပဈေးကွက်အဖြစ် သီးသန့်ရပ်တည်နိုင် သဖြင့် ကျောက်ပုစွန်ကို ဒေါ်လာပုစွန်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့မှ ရေလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောဆိုနေကြသည်။
" ရခိုင်မှာ ရေလုပ်ငန်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊ တခြား သားငါး၊ ပုစွန်တွေက ပြည်တွင်းပြည်ပ နှစ်မျိုးအသုံးပြု ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျောက်ပုစွန် လုပ်ငန်းက ပြည်ပဈေးကွက်သီးသန့် တစ်ခုတည်းသာ ရပ်တည်နေတယ်။ ပြည်ပ၀င်ငွေရရှိမှု အားကောင်းတဲ့အတွက် ကျောက်ပုဇွန်ကို ဒေါ်လာပုဇွန်လို့တောင် ခေါ်ကြသေးတယ်။ " ဟု ကျောက်ဖြူမြို့မှ ရေလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျောက်ပုဇွန်ကို တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံများသို့ Export ရောင်းချကြပြီး၊ ပြည်ပဈေးကွက် တစ်ခုတည်းကိုသာ အမှီသဟဲ ပြုနေရသည်နှင့်အညီ၊ ဈေးအတက်အကျ မှာလည်း ပြည်ပဈေးကွက်၏ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းကိုလိုက်၍ ပြည်တွင်းတွင် ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကြောင်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှ ပုဇွန်ကန်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
" ရခိုင်ကလာတဲ့ ကျောက်ပုဇွန်တွေက နိုင်ငံခြားဈေးကွက်မှာ ရောင်းပန်းလှတယ်ဗျ။ ရခိုင်ကျောက်ပုဇွန်ဟာ ဧရာဝတီကျောက်ပုဇွန်ထက်အရွယ်အစားပိုကြီးတယ်။ အရသာလည်း ပိုရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ရခိုင်ပုဇွန်က အခြားဒေသတွေထက် အထွက်နှုန်းပိုကောင်းပြီး ဈေးပိုလည်းရတယ်။ "ဟု အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်ကပြောသည်။
ကျောက်ပုဇွန်အား ကာလာ၊ အစိမ်း၊ ရိုးရိုးဟု သုံးမျိုးခွဲထားကာ ကာလာမှာ အမြင့်ဆုံးဈေးရှိပြီး လက်ရှိပေါက်ဈေးမှာ ဆယ်သားအထက်တပိဿာလျှင် လေးသောင်းခွဲဈေးနှုန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
" တစ်ပတ်မှာ ပျမ်းမျှလေးကြိမ်လောက် ရန်ကုန်ကိုပို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ကြိမ်ပို့ရင် ၃ ပုံးကနေ ၁၀ ပုံးထိ ပုဇွန်ရရင် ရသလို ပို့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ပုဇွန်ကန်ကြီး တွေမှာ သူတို့ပေးတဲ့ဈေးအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ရောင်းကြပါတယ်။ "ဟု ရန်ကုန်သို့ တင်ပို့ရောင်းချပုံအကြောင်းကို ပုဇွန်လုပ်ငန်းရှင် နောက်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးခင်အေးမောင်က ရှင်းပြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ကျောက်ပုဇွန်ဒိုင်အများဆုံးတွေ့ရပြီး၊ ကျောက်ဖြူ၊ မြေပုံ၊ အမ်းစသည့် မြို့နယ်များမှ ကျောက်ပုဇွန်ဖမ်းသူများက ကျောက်ဖြူမြို့ရှိ ပုဇွန်ဒိုင် (၁၈) ဒိုင်တွင်လာရောက် ရောင်းချ ကြသည်။
ရခိုင်ကျောက်ပုဇွန်မှာ သဘာဝမြစ်ချောင်းများ၏ ရေအောက် ပေ ၂၀ ကျော် အနက်ရှိ ကျောက်ဆောင်များအကြားမှာ နေထိုင်လေ့ရှိပြီး၊ အရှည် ၃၆လက်မ၊ လုံးပတ် ၂၄လက်မထိ ရှည်လျားကာ၊ ဇန်န၀ါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် ကျောက်ပုဇွန်အများဆုံး ဖမ်းယူရရှိနိုင်သည်။ ပုဇွန်သားပေါက်ကာလ ဇွန်လမှ စက်တင်္ဘာလများအတွင်း ဖမ်းဆီးခြင်းမပြုရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေဖြင့် တားမြစ်ထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျောက်ပုဇွန်လုပ်ငန်းကို ၁၉၉၀ ကျော်ကာလမှ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး၊ ယခုအခါ ကျောက်ပုဇွန်လုပ်ငန်းရှင် ၃၀ ခန့်ရှိနေပြီး၊ ကျောက်ပုဇွန်ဖမ်းရေလုပ်သားမှာ ရာနှင့်ချီလျက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းဦးစီးဌာန ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဦးမင်းလွင်ဦး (ထောင်မှူး) ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဆိုသူသည် ဘူးသီးတောင် အကျဉ်း ထောင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား ရခိုင်လူမျိုး ဝန်ထမ်းများအာ အမျိုးသားရေး အရ ခွဲခြား ဆက်ဆံမူများ ရှိနေသည်ဟု ပြောသည်။
ဦးမင်းလွှင်ဦးသည် ဗမာလူမျိူး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ဝန်းထမ်းများအား “ မင်းတို့ ရခိုင်တွေ ဗမာလူမျိူးရဲ့ ဖဝါးအောက်မှာဘဲ ရှိတယ်။ အခု ကုလားသတ်လို့ အားလုံးသေကြ တော့မယ်” ဟု ဆိုကာ လူမျိုးရေး အရ စော်ကားသည့် စကားများ ပြောဆိုင်ပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆက်ဆံနေကြောင်း များမကြာမှီက လွှတ်မြောက်လာသူ အကျဉ်းသား တစ်ဦးကို ကိုးကားပြီး အဆိုပါ အဖွဲ့က ပြောသည်။
အကျဉ်းသားများကိုလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိူဖေါက်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်း၊ သောက်ရေ မလုံလောက်သဖြင့် ထောင်သားများကို လက်ဆေးရေများကို အတင်းအဓမ္မ တိုက်ကျွေး မူများလည်း ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
၁၃ နှစ်ကျော်ကြာမှ စစ်တပ်က သိမ်းထားသော လယ်မြေများကို လယ်သမားများ ပြန်လည်ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ
၁၃ နှစ်ကျော်ကြာ စစ်တပ်က သိမ်းပိုက်ထားပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာ မရခဲ့သော လယ်မြေများကို ပိုင်ရှင် လယ်သမားများ အနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည် ဌားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် နေပူခံ၊ ပေါင်းဇား စသည့် ကျေးရွာများမှ လယ်ဧက ၁၀၀၀ ကျော်ကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်က သိမ်းယူသွားခဲ့သည်။
လယ်မြေများကို သိမ်းယူသွားပြီးနောက် ရသေ့တောင်မြို့မှ စီးပွားရေး သမား ဦးစောအောင်သိန်းအား ဌားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး လယ်သမားများအား လယ်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ကို တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ လယ်သမားများကို ဦးစောအောင်သိန်းကို ငှားရမ်းသောဈေးနှုန်း ကျပ်ငွေ ၆၅ သိန်းဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည် ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသဖြင့် တပ်မတော်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လယ်သမား တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ အယင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ လယ်ယာမြေတွေ အသိမ်းခံရပြီး စစ်တပ်က တဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ဦးစောအောင်သိန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားခဲ့တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တို့မှာ လယ်မလုပ်ရဘဲ အထူး အခက်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ လုပ်ကိုင် စားသောက်စရာ မြေမရှိတော့ တစ်ရွာလုံးက လူတွေ မငတ်ရုံ တမယ် အခက်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ ကိုယ့်လယ် မြေကို ကိုယ်ပြန် မရသေးသည့် တိုင်အောင် စစ်တပ်ကနေ တဆင့် ပြန်လိ်ု့ ငှားရမ်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက် တပ်မတော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပေါင်းဇား၊ နေပူခံ ကျေးရွာများမှ လယ်မြေဧက ၇၄၄ ဒဿမ ၇၇ ဧကကို စစ်တပ်က သိမ်းယူသွားခဲ့သည်။ သို့သော် ဒေသ အတွင်းမှ စစ်အရာရှိများသည် ၇၄၄ ဒဿမ ၇၇ ဧက အစား ဧက ၁၃၀၀ ကျော်ထိ ပိုမို သိမ်းယူကာ ဒေသအတွင်းက စီးပွားရေး သမား တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးစောအောင်သိန်းအား နှစ်အလိုက် ဌားရမ်းခဲ့သည်။
၎င်းနောက်ပိုင်းတွင် ဦးစောအောင်သိန်းသည် စစ်အရာရှိများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ၁၃ နှစ်တိုင်တိုင် လယ်သမားများထံမှ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ပေါင်းဇားရွာ လယ်သမားတစ်ဦးက နိရဉ္စရာသို့ သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဆီက သိမ်းထားတဲ့ ဧက ၁၀၀၀ ကျော်ကို ကျပ်ငွေ ၆၅ သိန်းနဲ့ တပ်ကနေ လေလံ ဆွဲတယ်လို့ ဦးစောအောင် သိန်းက ပြောပါတယ်။ အဲသလို ဆွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေကို သူကတစ်ခါ ထပ်မံ ဌားရမ်း လုပ်ကိုင်စေတယ်။ အဲသလို လုပ်ရာမှာ ရလာတဲ့ ပုဇွန်တွေကို သူ့ဒိုင်ကို သွင်းရတယ်။ မသွင်းလို့ မရဘူး။ ဈေးကိုလည်း အပြင်က ဈေးမျိုးမပေးဘဲ အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြပြီး ဖြတ်တယ်။ စပါးဆိုရင်လည်း သူပေးချင်တဲ့ ဈေးနုန်းနဲ့ ပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေဆီက ၁၃ နှစ်တိုင်တိုင် ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ယူခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ လယ်သမားတွေ အထူးနစ်နာခဲ့ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ထိုသို့ ထိခိုက်နစ်နာမူများ ရှိခဲ့သဖြင့် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အစိုးရ တက်လာသောအခါ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြသော ရွာသားများက သူတို့ပိုင် လယ်မြေများပေါ်သို့ ကျွဲနွားများဖြင့် အတင်းထွန်ယက် စိုက်ပျိုးရာ ဦးစောအောင်သိန်းမှ ပိုင်နက်ကျူးကျော်မူ၊ ဖျက်ဆီးမူ၊ လုယက်မူ စသည့် စွပ်စွဲချက်များဖြင့် တရားစွဲဆိုသဖြင့် လယ်သမား ၂၆ ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ ယခုအချိန်ထိ မြို့နယ်တရားရုံတွင် တရား ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
အဆိုပါ လယ်မြေကိစ္စ အငြင်းပွားမူကြောင့် ဒေသခံများ အကြားတွင်လည်း မကျေနပ်မူများ တိုးပွားလာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ထိ သတင်းရောက်ရှိသွားကြာင်းသိရသည်။
၎င်းနောက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်မှ ယခင် ဦးစောအောင်သိန်းအား နှစ်စဉ် သိန်း ၆၅ သိန်းဖြင့် ဌားရမ်းသော လယ်မြေဧက ၁၃၀၀ ကျော်အထဲမှ ၇၄၄ ဒဿမ ၇၇ ဧကကို လယ်သမားများကို ၆၅ သိန်းဖြင့် ပြန်လည် ငှားရမ်း လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြုပေးလိုက်သည်။
လယ်ယာမြေများကို လယ်သမားများပိုင် လယ်မြေအဖြစ် ရရှိအောင် ဆက်လက် ကြိုးစား လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုလည်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှမောင်သိန်းက ပြောသည်။
“ ရွာသားမြေ၊ တပ်မတော်မြေဆိုပြီး ခွဲခြားရလို့ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီ၊ အခုတော့ခါ ရွာသားတွေမှာ ဘုံမြေအဖြစ် သော်၎င်း၊ ကိုယ်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင်မြေအဖြစ်သော်၎င်း ရရှိနိုင်အောင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ မြို့နယ်စာရင်းဦးစီးဌာနတို့က ညှိပြီးတော့ အဲဒီလယ်မြေတွေကို ခွဲပေးဖို့ လုပ်နေကြပါတယ်။”
လယ်ဧက ၇၄၄ ဒဿမ ၇၇ ကို လယ်သမားများကို ပြန်လည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားသော်လည်း ကျန် လယ်ယာမြေများကို စစ်တပ်မှ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု သိရသည်။
သဲသောင်ပြင်တွင် နစ်မြုပ်နေသော ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ အ၀ကျွန်းဒေသမှ ရှေးခေတ် ရခိုင်လှေကြီးကို အောင်မြင်စွာ ဖေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အလျား ၇၂ ပေ၊ အနံ ၂၃ ပေထိ ကြီးမားသော ရခိုင်ရှေးခေတ်လှေကြီးကို ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ပြန်လည်တူး ဖေါ်ရာတွင် နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် အောင်မြင်မူ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှေးဟောင်း သုတေသနက ပြောသည်။
ပြတိုက် တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ Kuakata ဒေသ တွင် အဆိုပါ လှေကြီးအား ပြသထားရန် သက်ဆိုင်ရာမှ စီစဉ်နေသည် သိရသည်။
၎င်းရှေးဟောင်းလှေကြီးကို လွန်ခဲ့သော နှစ် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က မြန်မာ- ရခိုင် အခေါ် အ၀ကျွန်းဒေသ (ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အခေါ် Kuakata ) အနီးက ပင်လယ်ကမ်းစပ် သဲသောင်ပြင် တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာနမှ ၎င်းလှေကြီးကို တူးဖေါ်ခဲ့ရာ ဒီရေမြင့်တက်လာသဖြင့် ယခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ နေ့က ရပ်နားထားခဲ့ရသည်။
ဒီရေများ ပြန်နိမ့်ကျသွားသည့် အချိန် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့က ပြန်လည်တူးဖေါ်ရာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဒေသအတွင်းမှ ကျွမ်းကျင်သူများ အကူအညီဖြင့် မြေပေါ်သို့ အောင်မြင်စွာ တူးဖေါ် မတင်နိုင်ခဲ့သည်။
ရှေးဟောင်း လှေကြီးမှာ သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လှေကြီး ဖြစ်ပြီး ၁၇၈၄ ခုနှစ် ဗမာ ဘုရင် ရခိုင်ကို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်စဉ် ရခိုင်အမျိုးသားများ ရခိုင်ပြည်မှနေ အဆိုပါ ဒေသသို့ ထွက်ပြေးလာရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော လှေကြီးဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလာ ရှေးဟောင်း သုတေသန တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့ (ယာယီ) ကို တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်မှ ကိုယ်စာလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တောင်သူ လယ်သမား အရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူ လယ်သမားအဖွဲ့ (ယာယီ) ကို တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခုမှ ကိုယ်စား လှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်အထိ ရန် ကုန်မြို့ ရွေဂုံတိုင်ရှိ Exile ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲတွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်သူ လယ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ကိုသန်းဌေးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
“ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၁၄ ခုက ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးကျစီနဲ့ စုစုပေါင်း ၂၈ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အဓိကတော့ တောင်သူ လယ်သမားတွေရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်ရွယ် ဖွဲ့စည်းတာပါ” ဟု ကိုသန်းဌေးက ပြောသည်။
“ မြန်မာ တောင်သူလယ်သမားတွေဆီက အစိုးရ အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီတွေက မလိုအပ်ဘဲနဲ့ လယ်မြေတွေကို သိမ်းယူထားတယ်။ သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်မြေတွေမှာ အစိုးရကလည်း ဘာမှ လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ သိမ်းထားတော့ လယ်သမားတွေ လယ် မလုပ်ရဘဲနဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ဆုံးရှုံးနေကြတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်တို့က လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော် အဆင့်ထိ လုပ်ဆောင်ပေးမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျေးရွာတွေမှာ တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့ပေးဖို့နဲ့ မတရားသိမ်းယူထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို ပြန်လည် ရရှိ အောင် တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းရတာ ဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ဆိုသည်။
“ ယာယီဆိုတာက လာမယ့်နှစ်မှာ ပြည်နယ် တိုင်းအဆင့်ကနေ ကျေးရွာအဆင့်ထိ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ပြီးတော့ တောင်သူတွေကိုယ်စားလှယ်တွေကို တင်ပေးမယ်။ ဒီလို ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ယာယီ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ခါ ဒီယာယီအဖွဲ့ကဘဲ လယ်ယာမြေကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
လက်ရှိတွင် တောင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စ မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စကို အဓိက လုပ် ဆောင်ပေးသွားမည်ဟုလည်း ကိုသန်းဌေးက ပြောသည်။
မြစ်နားရွာ ဆရာတော်ကြီး ဈာပန ကျင်းပမည့် နေ့ရက်အပြောင်းအလဲဖြစ်
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့ထိ သုံးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော မြစ်နားရွာ ဆရာတော်ကြီး၏ ဈာပန အခမ်းအနားကို အကြောင်း မညီညွှတ်သဖြင့် ကျင်းပမည့် နေ့ရက်ကို အပြောင်းအလဲ လုပ်လိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
“ ယခင် ဆုံးဖြတ်ထားတာက မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ကနေ ၂၉ ရက်နေ့ထိ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ရက်တွေမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှာ ဆန္ဒပြမူတွေနဲ့ မတည်ငြိမ်မူတွေ ရှိနိုင်တဲ့ အတွက် ရက်အနည်း ငယ် နောက်ကို ဆုတ်ပြီး ဧပြီ ၄-၅-၆ ရက်နေ့ ကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်” ဟု မြစ်နားရွာ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျင်းပမည့် ရက်အပြောင်းအလဲကို ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သော ဒေသခံ လူကြီးများနှင့် ဈာပနပွဲတော် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မီတီတို့၏ အစည်းအဝေးတွင် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြစ်နားရွာ ဆရာတော်ကြီးမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံမှာ အထင်ကရ သက်တော်ကြီး ၀ါတော်ကြီး ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါး ဖြစ်သဖြင့် ဆရာတော်ကြီး ဈာပနပွဲတော်ကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အထူး စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
အနီးအနားရှိ ကျေးရွာများသာမက ရပ်ဝေးကျေးရွာများမှလည်း ဆရာတော်ကြီး၏ ဈာပနပွဲတော်တွင် ပါဝင်ဆင်နွဲရန် ကတလားအဖွဲ့များ၊ ဧယင်ကျူး အဖွဲ့များကို ကြိုတင် ပြင်ဆင် စီစဉ်နေကြပြီ ဖြစ်ကြောင်းသတင်း ရရှိသည်။
တွံတေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သိမ်းဆည်းခံထားရသော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရန် ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြ၍ ဆက်လက် ကြိုးစားပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ-KPP က ယမန်နေ့က ပြောကြားလိုက် သည်။
ကရင်လူမျိုး အများစု နေထိုင်သော ရေတွင်းကုန်းရွာ၊ ထော်ကူးရွာ၊ မရမ်းတပင်ရွာများမှ ဧက ၂,၈၀၀ကျော်ရှိ လယ်မြေများကို မြန်မာအစိုးရ၏ စစ်တပ်များနှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးဦးစီးဌာနတို့မှ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNPP တောင်ပိုင်းခရိုင် ဥက္ကဌ မန်းအုန်းမြင့်သိန်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“လယ်သမားတွေရဲ့ ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကို ကျနော်တို့က အနီးကပ် သိနေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဥပဒေကြောင်းအရ ဌာနဆိုင် ရာအဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြသွားပေးပါ့မယ်။ လယ်သမား တွေဟာ အရင်က မပြောရဲ မဆိုရဲခဲ့ကြဘူး။ အခုလို အချိန်ရောက်မှ ကိုယ့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေကို ပြောခွင့်ရပြီး ပြန်တောင်းဆိုနေကြတာပါ”ဟု မန်းအုန်းမြင့်သိန်းက ပြော ဆိုသည်။
ထို့အပြင် လယ်ယာမြေများကို သိမ်းဆည်းပြီး ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးများအား ငါးမွေးကန်များ၊ အရက်ချက်စက်ရုံများအ ပြင် သီးစားချ၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခွင့် များ ပေးထား ကြောင်းလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ရေတွင်းကုန်းရွာရှိ လယ်သမားတစ်ဦးကလည်း “ကျနော်တို့ စစ်တပ်ကို သီးစားခပေးပြီး ဆက်လုပ်စားနေပါတယ်။ ကိုယ်တစ် သက်လုံး လုပ်စားလာခဲ့တဲ့ လယ်ကို သီးစားခ ပေးလုပ် နေရတာ ရင်နာဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ထက် ပိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ကိုလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေလည်း ကြားနေ ရပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ယင်းအခြေအနေများကြောင့် ထော်ကူးရွာရှိ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေသော လုပ်ငန်းရှင် ဦးအေးသောင်းထံ သွားရောက်တွေ့ ဆုံ၍ မည်ကဲ့သို့ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိကြောင်း ကို မေးမြန်းရာ တွံတေးမြို့ရှိ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန တာဝန်ခံအရာရှိ မိုးကျော်ထူး နှင့် မြေစာရင်းရုံးချုပ်သို့သာ သွားရောက်မေးမြန်းပါရန် ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။
သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများမှ ထော်ကူးရွာရှိ လယ်မြေများမှာ ယခင်က တဧကလျှင် တင်း ၉၀ကျော်ထွက်ခဲ့သော လယ်မြေများဖြစ်ပြီး ကျေးရွာသမ၀ါယမပိုင် လယ်မြေများ ပါဝင်သကဲ့သို့ တနိုင်ငံလုံးရှိ သမအသင်းများသာမက အစ္စရေးနိုင်ငံမှ ILO အကြံပေး Mr. A.L Madi မှ ၁၉၈၆ခုနှစ်က လာရောက်လေ့လာခဲ့သော စံပြစိုက်ကွင်းများ ဖြစ်သည်။
အပေါ်ယံကြော ခိုင်မာမှု မရှိသေးသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု အချို့အကြား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အ စည်းတို့ လက်ထဲမှာကိုင်ထားသည့် သေနတ် အများအပြား တုတ်ချောင်းဖြစ်သွားကြသလိုမျိုး၊ မနေ့တနေ့ကအထိ ယုံကြည်ကိုးစား မျှော်လင့်အားထားခဲ့ကြသော လူထုခေါင်းဆောင် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကို လူထုအနေဖြင့် မည်သို့မျှ အားကိုးအားထားပြု၍ မရနိုင်ကြောင်း၊ လူထုကို လွတ်မြောက်ရန် ဦးဆောင်ခေါ်ယူရမည့်အစား စစ်အုပ်စုတို့ ပြုသမျှ နုရမည့်ဘ၀၊ ကျားသနားမှ နွား ချမ်းသာမည့် ဘ၀သို့ တွန်းပို့ပေး နေကြောင်းများ ပီပြင်စွာ သိလာရသည့်အဖြစ်မှာ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲဝင်ပြည်သူတို့၏ စိတ်ဓာတ်အားမာန်များကို သဲထဲရေသွန် ယူကြုံးမရ ဖြစ်သွား စေလေသည်။ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုး လိုလားသူများအနေဖြင့် လူထုဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကို ထိန်းကွပ် ဖေးမပေးကြရမည် ဖြစ်၏။
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ကျူးကျော် ထိုးစစ်ဆင်မှုများ၊ လက်ပံတောင်းတောင် မီးလောင်ဗုံးကိစ္စများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသူများကို နှောက်ယှက်ဟန့်တား ဖမ်းချုပ် မှုများ၊ လယ်သိမ်းခံ မြေသိမ်းခံ လယ်သမားတို့၏ မကျေနပ်မှုများ ဖြင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အပူလုံးကြွနေကြချိန်၊ ဟိုနိုလူလူ၌ ဆုတစ်ဆုသွားယူပြီး ကိုရီးယားသို့ ခရီးတခေါက်ထွက်ခဲ့သော ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မှာ ရန်ကုန်ကို ဘယ်နေ့ဘယ်ရက် ဘယ်အချိန်က ဘယ်လိုပြန်ရောက်လာမှန်း ဘာသတင်းမျှ မကြားလိုက်ရပဲ ဗိုလ် ချုပ်မွေးနေ့ကျခါမှ ဗီဒီယိုဖိုင်ကလေးတခုတွင် ပေါ်လာခဲ့လေသည်။
တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဖြစ်ပွားနေသည့်ကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကာယကံရှင်များက ဖိတ်ခေါ်ပါက သူမအနေဖြင့် ကြား ၀င်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။ မကမ်းလှမ်းပဲ သွားဖြေရှင်း ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးရာကျပါတယ် ဟုလည်း သူမ ဆို၏။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ သူမ ပြည်ပသို့မထွက်မီကပင် ကချင်ငြိမ်း ချမ်း ရေး ကွန်ယက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုင်းသိပြည်သိ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ တဘက်က ကမ်းလှမ်းလျှင်ပင် လုံလောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ စစ်အုပ်စုက ထပ်မံ ကမ်းလှမ်းစရာ မလို။ ကချင်၏ကမ်းလှမ်းမှုကို ကိုင်စွဲကာ စစ်အုပ်စုနှင့် ကချင်အကြား ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးရုံသာ ဖြစ်သည်။ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို လျစ်လျူရှုကာ အမေရိကားနှင့် ကိုရီးယားသို့ ထွက်သွားခဲ့ပြီးမှ ယခုလို ပြောဆိုလာသည့်အပေါ် ကချင် အပါအ၀င် မည်သည့် တိုင်းရင်းသား တစုတဖွဲ့ကမျှ တုံ့ပြန်ခြင်း ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းခြင်းများ မပြုတော့ချေ။
အခြေခံဥပဒေကို ဘာတခုမျှ မပြင်နိုင်ဘဲ လူထုထောက်ခံမှုတခုတည်းအပေါ် အားပြုရပ်တည်ကာ သမ္မတလုပ်ပြီး အာ ဏာလိုချင်နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် မဖြစ် စလောက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေသည့် ကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ခံမနေပဲ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲ ပြဿနာများ၊ ကျူး ကျော်သိမ်းပိုက်ခံ အစော်ကားခံ အလုပ်သမား လယ်သမားတို့၏ ပြဿနာများနှင့်၊ ဗမာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေ သည့် ပြဿနာများ၊ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ပေါ်ထွန်းရေး ပြဿနာများကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ တွေ့သင့်တွေ့ ထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကာ လုပ်ဆောင်သွားရမည် ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိပဲ အနုပညာရှင်များပင် ရှာဖွေ ကူညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သော ပညာရေးရန်ပုံငွေလိုကိစ္စ များဖြင့် အချိန်ဖြုန်း၊ ခေါင်းရှောင်နေတတ်သူအား လူထုသည် သမ္မတအဖြစ် မဲပေး တင်မြှောက်နိုင်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်။ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ သမ္မတတယောက် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ် ရင့်ကျက်မှုမျိုးရှိ အောင် မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရမည် ဖြစ်လေသည်။
မြ၀တီ စက်မှုဇုံကို လာရောက်ကြည့်ရှုသော ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းအား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး သွား ရောက်တွေ့ဆုံသည့် သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရသည်။ စစ်အုပ်စုနှင့် ကေအဲန်ယူတို့၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အခြေအနေမှာ ခိုင်မာ မှု မရှိသေးကြောင်း၊ ခိုင်မာအောင် အရင်လုပ်ပြီးမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေကို ဆက်လုပ်သင့်ကြောင်း ဒုသမ္မတအား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ လမ်းကြောင်းမှန်ကို ပီပြင်ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်လာသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအား လှိုက်လှဲဝမ်းသာစွာ ကြို ဆိုရမည် ဖြစ်၏။ ရန်သူနှင့် အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးလုပ်သည်မှာ သူ့အကျိုး ကိုယ့်အကျိုး ချိန်ဆ ညှိနှိုင်း၍ လုပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်သူ က သူ့အကျိုးကွက်ကွက်ကလေးကို ကြည့်၍လုပ်သည့်တိုင် မိမိတို့အနေဖြင့် အမျိုးသား ပြည်သူတရပ်လုံး၏ အကျိုးကို မျှော်ကိုး လုပ်ဆောင်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်။ ပဒိုမန်းရှာ ကျဆုံးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အဖြစ် ပဒိုမန်းရှာ အမှတ်တရ ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ ကဗျာ ဆောင်းပါးများကို အွန်လိုင်းမှာ တွေ့မြင်ဖတ်ရှုရသည်။ အာရ်အက်ဖ် အေက တည်းဖြတ် တင်ဆက်ထားသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ရိုး ရှင်းသော ဆရာ့ဟန်ပန်နှင့် စကားသံများကို ပြန်၍တွေ့ကြ ကြားကြရသည်။ “အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် ကျနော်တို့ သူပုန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူပုန်ဖြစ်ရတာလည်း ကျနော် ဂုဏ်ယူခဲ့ တယ်။ ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စ၊ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ရတာ။” “မတရားမှုမှန်သမျှကို ပုန်ကန်တာဟာ တရားတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း မတရားမှုတွေကို ကျနော် ပုန်ကန်မှာပဲ။ တရားမှုတွေ ဖြစ်ထွန်းလာအောင် ကျနော် ကြိုးစားမယ်။” “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့ ထိုးစစ်တွေကို ရပ်ပြီးတော့ free and fair ဖြစ်တဲ့ ဆွေးနွေး ပွဲကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ (ဥပမာ) ဒေါ်စုကို ဖမ်းထားပြီးတော့မှ ဒေါ်စုနဲ့ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတဲ့စကား ဟာ ယုတ္တိယုတ္တာ မရှိဘူး။ ဒါဟာ တကယ့် meaningful political dialogue လို့ မပြောနိုင်ဘူး။ ထိုနည်းတူစွာ ကေအဲန်ယူကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် စစ်ဆင်ရင်းနဲ့ ကေအဲန်ယူနဲ့ စကားပြောမယ်ဆိုတာလည်း ယုတ္တိယုတ္တာ မရှိဘူး။”
ယူအဲန်အက်ဖ်စီနှင့် ချင်းမိုင်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရှမ်းအဖွဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်ဆစ်နှင့်ပါ တွေ့ဆုံနေဆဲအချိန်မှာပင် တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော အဖြစ်မျိုး ပြီးခဲ့ သည့်လ ဒီကေဘီအေနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင်လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းများမှာ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် အမှတ်တမဲ့ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်သည့်ကိစ္စ မဟုတ်။ တိုင်းရင်း သားအဖွဲ့အ စည်းများနှင့်တွေ့တိုင်း ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် အရေခြုံအစိုးရနှင့် စစ်တပ်သည် ၎င်းတို့ချင်း သေချာစွာ အကွက်ချ စီစဉ်ထားခဲ့ကြပုံရ လေသည်။
၂၀၁၀ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းက ကြံ့ဖွံ့အသင်းဥက္ကဌလည်းလုပ် ၀န်ကြီးချုပ်လည်း လုပ်နေသော ဦးသိန်းစိန် က ၎င်းတို့ စစ်အုပ်စု သစ္စာခံ မြစ်ကြီးနား လ၀ါယန်အခြေစိုက် ဦးလဆန်အောင်ဝါ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နှင့် နယ်ခြားစောင့် စခုန်တိန့် ယိန်းအဖွဲ့တို့ကို ခေါ်တွေ့ကာ ရွေးကောက်ပွဲပြီးပါက ကေအိုင်အိုကို အရှေ့တောင်အာရှ အာစီယံတွင် ပထမဆုံးစံပြအဖြစ် တိုက် ခိုက်ချေမှုန်းမည်ဟု ပြောလိုက်ကြောင်း ကေအဲန်ဂျီ ကချင်သတင်းဌာန၏ စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့သတင်းတွင် တွေ့ရသည်။ စက်တင်ဘာ (၁)ရက်မှစ၍ လက်နက်ချရန် စစ်အုပ်စုက ညွှန်ကြားခဲ့သည့်အပေါ် ကေအိုင်အေက သြဂုတ် ၃၀ရက်နေ့မှာ လက်မ ခံကြောင်း ပြန်ကြားပြီးသည့်နောက် ဦးသိန်းစိန်၏ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကေအိုင်အိုအား လေးကြိမ် အခွင့်အရေး သီးခြားပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ (၁) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးခြင်း၊ (၂) နယ်ခြားစောင့် တပ်(BGF)အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းရန်၊ (၃) ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်နှင့် (၄) နောက်ဆုံး လက်နက်စွန့်ရန်ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြန်လည် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေးနှင့် လက်နက်ချရေးကို လက်မခံခဲ့သော ကေအိုင်အိုအား နောက်နောင် လက်နက်ချ အလင်းဝင်လာသော်လည်း လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်က ပြောခဲ့သည်။
ပြည်သူလူထုအများစု ဆန္ဒမပါပဲ ၀င်ခဲ့ကြရသည့် ကြံ့ဖွံ့အသင်းကို ပါတီအသွင်ပြောင်းကာ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက် ပွဲအတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး ကြိုတင်မဲ အပါအ၀င် မဲလိမ်မဲခိုးနည်း မျိုးစုံဖြင့် အနိုင်ရယူကာ သမ္မတအရေကို ခြုံလာခဲ့သော ဦးသိန်းစိန် မှာ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထဲတွင်လည်း ပူတာအိုသို့ သွားရောက်ပြီး ကချင်မျိုးနွယ်စု ရ၀မ်နှင့် လီဆူတို့ကို သီးသန့်တွေ့ဆုံ ကာ တချိန်တုန်းက ၎င်းတို့နှင့် အပြန်အလှန် သတ်ခဲ့ကြသည့် ဂျိမ်းဖောတွေကို ယခုလိုအချိန်တွင် ပြန်လည် သတ်ဖြတ်ရန်နှင့် သတ်မည်ဆိုလျှင် လက်နက်များ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်မီးမွှေး သွေးထိုးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘာလီအာစီယံ အစည်းအဝေး ပြင်ပမှာလည်း တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကို နာရီပိုင်း၊ ရက်ပိုင်းအတွင်း ချေမှုန်းလို့ ရနိုင်ကြောင်း မျက်နှာနေ မျက်နှာထားဖြင့် ပြောဆိုခဲ့သည်ကို ဗီဒီယိုသတင်းတွင် တွေ့ရသည်။ စိတ်ထား စေတနာ မကောင်း သည့် သွင်ပြင်လက္ခဏာမှာ မျက်လုံး၌ အထင်းသား ပေါ်နေလေသည်။ အရပ်ဝတ်အရေခြုံသမ္မတ သိန်းစိန်အနေဖြင့် အပေါ်ယံကြော အရေခွံများဖြစ်သော ကရင်ဝတ်စုံ ၀တ်ပြ၊ ချင်းဝတ်စုံ ၀တ်ပြပြီး တိုင်းရင်းသားများနှင့် တသားတည်းရှိကြောင်း ဟန်ဆောင်ညာဝါးနေသည်ထက် မြန်မာဝတ်စုံကို ပီပီပြင်ပြင်ဝတ်ကာ ရင်တွင်းကလာသော တကယ့်စေတနာဖြင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုအကျိုး ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်သင့်ပြီ ဖြစ်၏။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေးကိစ္စ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများ တကျော့ ပြန်လည် ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤတကြိမ်တွင် ပုလိပ်တွေ အကြမ်းဖက်ဖြို ခွင်းမှုများ လုပ်လာဦးမည်ဆိုပါက လူထုအနေဖြင့် သည်းခံနိုင် တော့မည် မဟုတ်ကြောင်းလည်း ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသူတွေက ထုတ်ဖော် ဟစ်ကြွေးကြသည်။ စစ်တပ်ကသိမ်း သည့် လယ်မြေအချို့ ပြန်ပေးမည်ဟု ဆိုနေချိန်၊ ကုမ္ပဏီအချို့ကလည်း ၎င်းတို့သိမ်းထားသည့် လယ် မြေအချို့ကို မူလပိုင်ရှင်များထံ ပြန်လည် ပေးအပ်မည်ဟု ဆိုလာချိန်၊ ယခုလအတွင်းမှာ ပင် ကချင်ပြည် မြစ်ကြီးနားမြို့ ရပ် ကွက်တွင်းမှ အိမ် ၂၃လုံးနှင့် လယ်ယာမြေတွေကို လျော်ကြေးမပေးပဲ သိမ်းယူခြင်း၊ ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ရပ်ကွက်ကြီး အမှတ် ၅၊ ၈၊ ၉နှင့် ကျေးရွာအချို့ မှ လယ်မြေ ဧကပေါင်း ၂၃၅၀၀ကို စက်မှုဇုံ စီမံကိန်း၊ လေယာဉ်ကွင်းနှင့် တက္ကသိုလ်နယ်မြေများအတွက် ဟုဆိုကာ ပိုင်ရှင်တွေကို မောင်းထုတ်ခြင်းများ လုပ်လာပြန်သည်။
ဤတကြိမ် ပေါ်ထွက်လာမည့် အုံကြွမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အခန်းကဏ္ဍ ပါရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ချေ။ လက်ပံတောင်းတောင်လူထု၊ လယ်သိမ်းခံ တောင်သူလယ်သမား လူထု၊ အဖိနှိပ်ခံ အလုပ်သမားလူထု၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက် သိမ်းမည့်လူထု၊ ဗမာတပြည်လုံး ဒုက္ခပေးနေသော ဦးပိုင်နှင့် ကာလုံကို ဖျက်သိမ်းမည့် လူထုသည် ဗမာပြည်နှင့် မဆီလျော် သော ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန့်ကျင်သည့်မူကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အရှုံးပေး အညံ့ခံရေး လမ်းကြောင်းသို့ နှစ် ပေါင်းများစွာ တွန်းပို့ခံလာခဲ့ရပြီးနောက် လူထုသည် ရန်သူနှင့် ပူးပေါင်းလုလု ခေါင်းဆောင်တုကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပေတော့မည်။ ပေါ်ပေါက်လတ္တံ့သော အုံကြွမှုမှာ ကောက်ရိုးမီးလို ၀ုန်းကနဲထတောက်ပြီး အရှိန်သေပြီးပြတ်သွားမည့် အုံကြွမှုမျိုး မဟုတ်။ ကာလကြာမြင့်စွာ တမြေ့မြေ့ ကြိတ်မှိတ် ခံစားလာခဲ့ရပြီးသည့်နောက် ဖွဲမီးလို တငွေ့ငွေ့ဖြင့် အဆုံးတိုင် ဖြိုဖျက်လောင်မြိုက်မည့် အုံကြွမှုမျိုး ဖြစ်၏။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ ယိုင်နဲ့နေသော အခြေအနေကို ကယ်တင်ရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် တောင်အာ ဖရိက ဘုန်းတော်ကြီးဒက်စ်မွန်တူးတူး ယခုရက်များအတွင်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားနိုင်ရေး ရဲစွမ်းသတ္တိရှိဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဒက်စ်မွန်တူးတူးက ပြော၏။ ဘုန်းတော်ကြီးသည် နိုဗယ်ငြိမ်း ချမ်းရေးဆုရှင် ဖြစ်သော်လည်း ကြားနေတတ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးသမားမဟုတ်။ မှန်ကန်သည့်ဘက်မှနေ၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်တတ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးသမား ဖြစ်လေသည်။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများကို တဖွဲ့ချင်းစီ ခွဲထုတ်လျက် အယောင်ပြ ဆွေးနွေးမှုများ၊ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများ လုပ်နေခိုက်၊ ၀နှင့် မိုင်းလားတို့၏ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ကုန် သွယ်မှုများကို အနှောက်အယှက်မပေးပဲ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်ထားသည်မှာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများဘက်မှ ၀င်ရောက်ကူညီကြမည်ကို စိုးရွံ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၀နှင့် မိုင်း လားတို့ကလည်း ၎င်းတို့ကို လာရောက်မတိုက်ခိုက်ပါက ၎င်းတို့ကလည်း စတင် တိုက်ခိုက်မည် မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ အခြေ အနေတခုပေါ်တွင် ၎င်းတို့နှင့် လောလောဆယ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားကြခြင်း ဖြစ်၍ ခိုင်မာသော ငြိမ်းချမ်းမှုဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ကျန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများတွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်ရေးကို ဖယ်ထား၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စမှာပင် ခိုင်မာစွာ သဘောတူညီမှု ရရှိသွားပြီဆိုသည့်အဖွဲ့ တဖွဲ့တလေမျှ မရှိသေးချေ။
ယူအဲန်အက်ဖ်စီနှင့် ဦးအောင်မင်းတို့အဖွဲ့ ချင်းမိုင်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ကိစ္စသည်လည်း တကယ်တမ်း ကျေနပ်အားရ ဖွယ် တိုးတက်ကောင်းမွန်သော ရလဒ်ကို ရရှိခဲ့လိမ့်မည်ဟု နိုင်ငံ ရေးအကဲခတ်များက ထင်မှတ်မထားကြ။ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲသည် အောင်ပွဲမခံနိုင်သေး။ အဖိနှိပ်ခံ လူထုတရပ်လုံး စစ်အာဏာရှင် လက် အောက်မှ လွတ်မြောက် ရေးသည်လည်း အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ မဆင်နိုင်သေး။ တော်လှန်ရေးသည် မပြီးသေး။ စစ်မှန်သော ငြိမ်း ချမ်းရေးကိုလည်း အရိပ်အယောင်မျှ မမြင်နိုင်သေး။
ယခုလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော ရန်သူ၏ စစ်ဆင်ရေးမှာ စားပွဲဝိုင်းတိုက်ပွဲတ၀က် စစ်မြေပြင် တိုက်ပွဲတ၀က် အနေအ ထား ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အရာရာကို စစ်ရေးအမြင် ဖြင့်သာ ကြည့်တတ်ကြသည်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကို ဘာစကား ပြောပြီး၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုတွန်းတင်ရမည်၊ ဘယ်ပုံပထုတ်ရမည်၊ ဘယ်နေရာကို ဘယ်လိုဝင် သိမ်းရမည် စသ ဖြင့် အစီအစဉ်တကျ ကျင့်သားရစွာ လုပ်တတ်ကြသည်။ နိုင်ငံရေးကိုလည်း စစ်ပရိယာယ်ဖြင့် သုံးသပ်စဉ်းစား လုပ်ကိုင်တတ်ကြ ၏။
All warfare is based on deception. အလုံးစုံသော သေနင်္ဂဗျူဟာ အတတ်ပညာဟူသမျှသည် လှည့်စားခြင်းအ ပေါ်၌ အခြေခံ၏ ဟူသော ဆွန်ဇူး၏ အဆိုအမိန့်ကို မမေ့မလျော့ နှလုံးသွင်းထားဖို့ လိုသည်။ ရန်သူ၏ မဟာဗျူဟာမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးကို အမြစ်ဖြုတ် ချေမှုန်းရေးနှင့် ဗမာ ပြည် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို ဆက်လက် ချုပ်ကိုင် ကျွန်ပြုနိုင်ရေး ဖြစ်သည်။ နည်းဗျူဟာအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအယောင်ပြ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ တနိုင်တပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ချွတ်ခြုံကျနေသော ပြည်နယ်လူထုဘ၀ ဦးမော့ လာစေရေးအတွက် စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ လမ်းတံတား စသည့် လူမှုရေး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အကူအညီများ မဖြစ် စလောက်ပေးကာ တိုင်းရင်းသားလူထုအပေါ် မေတ္တာစေတနာထားကြောင်း ပြသရေး၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း အင်အားချိနဲ့အောင်၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု မရှိအောင် အထက်အောက် အခွင့်အရေး မညီမမျှ ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုများဖြင့် သပ်လျှိုထိုး ခွဲရေး၊ — စသည့် မည်သည့်အခါကမျှ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိခဲ့သော လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာတွေအပေါ် အစဉ် အဆက်က ခေါင်းဆောင်များအတွင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သူတွေရှိသလို ရန်သူ့ လှိမ့်လုံးများနောက် အငိုက်မိပြီး နစ်မြုပ် ကျဆုံး သွားကြသူတွေလည်း ရှိသည်။ ယခုရန်သူ၏ လုပ်ရပ်တွေမှာ ပို၍ ဗြောင်ကျလာပြီး ဆွေးနွေးပွဲပြင်ပတွင် ဖက်လဲတကင်း ခင်မင် ရင်းနှီးသလိုလို၊ ရူးသလိုလို ကြောင်သလိုလို၊ စကားရောဖောရောဖြင့် လုံးတုတ် လိုက်လျှောချလိုက် လုပ်တတ်လာကြသည်။
နေပြည်တော်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သော ကေအဲန်ယူခေါင်းဆောင်များထဲမှ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို အင်တာဗျူး သည့် ဗီဒီယိုသတင်းတခုတွင် ရန်သူ့ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ခဲ့သည့် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က ကရင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး peace process နှင့်ပတ်သက်သည့် မင်းအောင်လှိုင်၏သဘောထား ပြန်လည် ပြောပြသည်ကို ကြည့်လိုက်ရသည်။ မင်းအောင် လှိုင်က ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် အောင်မြင်ပါတယ်ဟု ဆိုကြောင်း၊ ကျန်သည့် ၃၀ရာခိုင်နှုန်းကတော့ စစ်ရေးကိစ္စ အသေးအဖွား များဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မေးမြန်းသည်ကို ၇၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃၀ ရာ ခိုင်နှုန်းဟု ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အပေါ်တွင် အကဲဖြတ်တွက်ချက်ပါသနည်း။ စစ်အုပ်စုသည် နိုင်ငံရေးကိစ္စ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ အားလုံးကို စစ်ရေးအမြင်ဖြင့်သာ ကြည့်ရှုအကဲဖြတ်သည်ကို မမေ့ဖို့လိုသည်။ မင်းအောင်လှိုင်က ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပြေ လည်ပြီး ၃၀ရာခိုင်နှုန်း လောက် ကျန်နေသည်ဟု ဆိုသည်မှာ စစ်ဆင်ရမည့်ဒေသတွေအပေါ် သုံးသပ်ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
အခြားသတင်းတခုမှာတော့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့် လုပ် နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်တွင် ခြုံငုံပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့် လုပ်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကို ၇၀ရာခိုင်နှုန်း ကျေနပ်မှုရှိကြောင်း ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။ ပြောချင်လည်း ပြောခဲ့ပေလိမ့် မည်။ တကယ်တော့ မည်သည့်တိုင်းရင်းသား တစုတဖွဲ့နှင့်မျှ ပြီးပြတ် ပီပြင်သည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမျိုး၊ ငြိမ်းချမ်းမှု ဖော် ဆောင်ခြင်းမျိုးကို မလုပ်နိုင်သေးသောကြောင့် ဤစကားမှာ ကေအဲန်ယူနှင့်သာ ချိန်ထိုး နှိုင်းယှဉ်ကာ ပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်လေ သည်။
ကေအဲန်ယူမှာ တပ်မဟာ (၇)ခု ရှိနေသည်။ စစ်အုပ်စုနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မည့် တပ်မဟာတွေရှိသလို စစ်အုပ်စုအပေါ် ယုံကြည်မှု မရှိသော တပ်မဟာအချို့လည်း ရှိသည်။ တပ်မဟာ အားလုံးကို ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်တွက်လျှင် တပ်မဟာတခုလျှင် အကြမ်းဖျင်း ပျမ်းမျှ ၁၄ရာခိုင်နှုန်းကျော် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိမည် ဖြစ်သည်။ တပ်မဟာ (၅)ခု (၇၀ရာခိုင်နှုန်း)က သူနှင့် အတော် အတန် ပြေလည်ကြပြီး တပ်မဟာ(၂)ခု (၃၀ ရာခိုင်နှုန်း) က ပြေလည်မှု မရှိကြောင်း ဆိုလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ကရင် ပြည်နယ်ကို တစတစ သိမ်းသွင်းချုပ်ကိုင် ကြီးစိုး မည့် ၎င်းတို့အစီအစဉ်ကို အေးဆေး(ငြိမ်းချမ်းစွာ) အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ရေး ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် အောင်မြင်နေပြီဟု မင်းအောင်လှိုင်က တွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကေအဲန်ယူ၏ ဒေသတွင်း အခြေအနေကို အတွင်းကျကျ သိနေသော မိတ်ဆွေတဦးကမူ စစ်အုပ်စုနှင့် အတော်အ တန် ပြေလည်နေသည်ဟု ဆိုသော တပ်မဟာ(၅)ခုထဲတွင်ပင် မိုးထဲလေထဲ ကြုံဆုံလာရသည့်အခါ ကရင်လူထုဘက်က မဆုတ် မနစ် ရပ်တည်ကာကွယ်မည့် တပ်ရင်းတွေ အများအပြား ရှိနေကြောင်း၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်နင့် ဒီကေဘီအေ အချို့သည်လည်း ကေအဲန်ယူ အောက်ခြေတပ်အချို့နှင့် နားလည်မှု ရှိကြကြောင်း၊ ရန်သူသည် တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမည့် အစီအစဉ်ရှိသည့်အတိုင်း ကေအဲန် ယူအဖွဲ့အစည်းကို ဖြိုဖျက်ပြီးသည့်တိုင် နယ်ခြားစောင့်တို့ ဒီကေဘီအေတို့ကိုပါ အင်အားချိနဲ့ အောင် ကန့်သတ်ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်တစ်ခုတည်း ရှိရမည်ဆိုသောမူအရ မဝေးလှသောတချိန်တွင် ၎င်းတို့လက် အောက်ခံတပ်များအဖြစ် သွတ်သွင်းလျက် ကျန်အဖွဲ့များ ဖျက်သိမ်းပစ်မည် ဆိုသည်ကိုလည်း နယ်ခြားစောင့်များနှင့် ဒီကေဘီ အေတို့က သိရှိထားကြပြီး ဖြစ်၍ ၎င်းတို့လမ်းကြောင်းကို ၎င်းတို့ ရွေးချယ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေး နွေးနေမှုအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူကာ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်တွေတိုးပို့ ၊ ရိက္ခာတွေ တိုးပို့၊ အုတ်အင်္ဂတေ အဆောက်အဦ များ၊ လျှောက်မြောင်းများ ဘန်ကာများဖြင့် မည်သို့ပင် စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ထားစေကာမူ ကေအဲန်ယူ၏ နာမည်ကြီး ပျောက်ကြားစစ်ဆင်ရေးကို ရန်သူအနေဖြင့် ကာဆီးနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ နယ်မြေဒေသ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာ မှု၊ ရန်သူ၏ မတရားသော လုပ်ရပ်များကို မဆုတ်မနစ် တွန်းလှန်လိုစိတ်ရှိမှုနှင့် အချင်းချင်း သွေးစည်းညီညွတ်မှုတို့မှာ ရန်သူတို့ ၏ အယောင်ပြ စစ်ရေး ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ချေမှုန်းဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြော၏။
အမေရိကန်အစိုးရ အသုံးစရိတ်ဖြတ်တောက်မှု သောကြာနေ့ စတင...
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ နွယ်တဲ့ စီးပွားရေး အမေရိကန် ရင်းနှ...
မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ(၁၀၅) တစ်ခုမကရှိနေသည့် နော...
နွေရာသီမွန်စာပေသင်တန်းများ၌ ရိုးရာအကများပါ သင်ကြား...
ဈေးကွက်အတွင်း Nissan ပစ္စည်းရှား၍ ၀ယ်ယူလိုသူများ အ...
CPU နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးကတ်များ စတင်အသုံးပြုနိုင်...
ရခိုင် ကဏန်းပျော့လုပ်ငန်း ပိုမိုအောင်မြင်ရေး အစိုး...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအတွင်း အဆို...
ကျောက်ပုဇွန်လုပ်ငန်းမှာ ပြည်ပဈေးကွက်အဖြစ် သီးသန့်...
၁၃ နှစ်ကျော်ကြာမှ စစ်တပ်က သိမ်းထားသော လယ်မြေများကိ...
မြစ်နားရွာ ဆရာတော်ကြီး ဈာပန ကျင်းပမည့် နေ့ရက်အြေ...
ဘုရားသုံးဆူမြို့ ၆၆ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ ယခ...
လွတ်လပ်မှုရဖို့ ညီညွှတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဒက်စ်မွန်တ...
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ တိုးပွားလာသော်လည်း လိုအပ်နေဆဲပါ...
ဟံသာဝတီ ယာဉ်စခန်းကို ကားပလာဇာအဖြစ် တည်ဆောက်၍ စည်ပင...
ခရီးသွားကဏ္ဍ တိုးတက်ရေး နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ...
ဘေးကင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရေး ချန်ပီယံစက်ရုံအလုပ်သမ...
အဖမ်းအဆီး များသောကြောင့် မြန်မာ့သစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသိ...
မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားတို့ထံမှ စိတ်ကြွဆေး ၂ ...
မြန်မာ-မလေးရှား ကုန်သွယ်ရေး ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ရှိလာနိ...
နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် နှစ်ဦး ရန်ကုန်တွင် တေ...
အင်းလေး ဟိုတယ်ဇုန် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ တရားစွဲခ...
သာကေတ မာန်ပြေတွင် အခြေအနေ ပြန်လည်တည်ငြိမ်
ယုဇန ပလာဇာ ပိတ်ရက်မရှိတော့၍ ဈေးအုပ်ချုပ်ရေးအား ဆိ...
စာချူပ် ဖောက်ဖျက်ဟု ဝန်ကြီးဌာနအား မြန်မာမက်ခရို အင...
လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေသုံးစွဲဖို့ ကိ...
လယ်သမားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကြား အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဒဏ်...
ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စ်မွန် တူးတူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
ကျားမှောင်ခိုလုပ်ငန်း တရုတ် အစိုးရ တိတ်တဆိတ် အားပေ...
အီရန်ကို အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ နျူကလီးယား အဆိုပြုချ...
မအူပင် လယ်သမားတွေနဲ့ ရဲ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု လူ ၄၀ ...
ဗွီအိုအေ ဘီဘီစီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း အသံလွှင့်ချက်များ တရု...
စားအုန်းဆီ တန်ချိန် သုံးသိန်း ရှစ်သောင်းခန့် တင်သွ...
မုဒုံမြို့နယ်၊ ကတုံးပေါ်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းသိမ်း လယ်...
“စားသုံးသူကို ပြောချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ပ...